Bay of Arakan: January 2009
အနောက်နိုင်ငံများသို. အဘိဓမ္မာစတင်မျိုးစေ့ချသူ (သို့) ဦးရွှေဇံအောင်
ဤဆောင်းပါးကို ဓမ္မအလင်းသစ်ဂျာနယ်တွင် စာရေးသူတစ်ဦး(၀ံသပါလ-မြောင်းမြ) ကရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်တစ်ပါး ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ သိသူများ ညွှန်ကြားပေးကြပါဦး။ စာဖတ်သူများအတွက် အကျိုးများနိုင်သည် ဖြစ်သောကြောင့် ဆရာတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ပင် မတောင်းနိုင်ပဲ ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ဆရာတော်အနေနှင့်လည်း ယခုကဲ့သို. ဖော်ပြမည်ဆိုလျှင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခွင့်ပြုမည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသည် အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ထွန်းကားပျံ.နှံ.ရေးအတွက် အထူးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော George Turner သည် ၁၈၃၇-ခုနှစ်တွင် မဟာဝံသကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုပြီး ထုတ်ဝေသည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ပြီး ဗုဒ္ဓကျမ်းစာ အတော်များများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို. အများအပြား ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့၏။ ၁၈၈၁-ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သော ပါဠိအသင်းကြီးသည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ အနောက်နိုင်ငံများတွင် ပြန်.ပွားစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ အများအသိပင်ဖြစ်၏။ ထို.ပြင် Sir Edwin Arnold သည်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို လူကြိုက်များစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ.ရပါသည်။ ၁၈၇၉-ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် “အာရှတိုက်၏ အလင်းရောင်” “The Light of Asia” စာအုပ်သည် အနောက်နိုင်ငံသားတို.၏ အသည်းနှလုံးထဲသို. ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ထိုစာအုပ်သည် အနောက်နိုင်ငံသားတို. ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် စွဲမက်စေရန် အထူး တွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့၏။ သို.သော်လည်း သုတ္တန်နှင့် ၀ိနည်းလောက်ကိုသာလျှင် ဖြန်.ဖြူးနိုင်ခဲ့၏။ အဘိဓမ္မာသည် ၂၀ရာစု အစောပိုင်းအထိ အနောက်နိုင်ငံသားများနှင့် အတော်ပင် စိမ်းလှ၏။ အဘိဓမ္မာနှင့် အနောက်နိုင်ငံသားတို.ကြားတွင် အလွန်ပင် အလှမ်းကွာ လှပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုအလှမ်းကွာမှုကို မြန်မာလူမျိုး ဦးရွှေဇံအောင်က စတင်ချေဖျက်နိုင်ခဲ့၏။ ဦးရွှေဇံအောင် စတင် ထွန်းညှိပေးခဲ့သော အဘိဓမ္မာ မီးရှုးတိုင်ကို ဆရာတော် ဦးသေဋ္ဌိလက အဘိဓမ္မာ သင်တန်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ဆက်လက် တောက်ပစေနိုင်ခဲ့၏။ အဘိဓမ္မာကို အမှန်တကယ်ပင် တက်ကျွမ်းသူတစ်ဦး၏ ပထမဆုံးသော သင်တန်းဆိုလျှင်လည်း ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်၏။ ယနေ.အချိန်ဆိုလျှင် အဘိဓမ္မာသည် အရှိန်ကောင်းကောင်းဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို. ပျံ.နှံ.နေပြီဖြစ်၏။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို.တွင် ကွယ်လွန်သူ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒာဘိဝံသ ဆရာတော်က အခြေခံ အဘိဓမ္မာသင်တန်းကို ပို.ချပေးနိုင်ခဲ့၏။
ပါဠိစကားလုံးဖြစ်သည့် အဘိဓမ္မာတွင် ရှေ.စကားလုံး အဘိနှင့် ဓမ္မဟူသည့် စကားနှစ်လုံးရှိပါသည်။ အဘိစကားလုံးသည် သာလွန်ခြင်း၊ နူးညံ့နက်နဲခြင်း အဓိပ္ပယ်ကိုဆောင်ပါသည်။ အဘိဓမ္မာတွင် ဓမ္မသင်္ဂဏီ၊ ၀ိဘင်းဂ၊ ဓာတုကထာ၊ ပုဂ္ဂလပညတ်၊ ကထာဝတ္ထု၊ ယမကနှင့် ပဋ္ဌာနဆိုပြီး ၇-ကျမ်းရှိပါသည်။ အဘိဓမ္မာသည် ခက်ခဲနက်နဲလွန်းသဖြင့် အဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်သူများကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရှင်များအဖြစ် သဘောထားကြ၏။ အဘိဓမ္မာပိဋကတွင် သာမန်ရိုးစင်းသော သုတ္တန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုနက်နဲလှသည့် ဗုဒ္ဓဟောကြားချက်များ ပါဝင်နေသဖြင့် အရေးကြီးလှ၏။ အဘိဓမ္မာသည် စိတ်နှင့်ရုပ်တို.၏ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်းဖြစ်၏။အဘိဓမ္မာကို လေ့လာခြင်းသည် မြန်မာတို.အဖို. အလွန်ထူးမြတ်လှပြီး တန်ဖိုးလည်း အလွန်ထား၏။ ထို.ပြင် သံဃာတော်များသည်သာမက လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်း အဘိဓမ္မာကို တန်ဖိုးထားပြီး သင်ယူနေကြ၏။ စစ်မဖြစ်မီကာလတွင် မြန်မာတို.၏ အဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်မှု ဂုဏ်သတင်းကြောင့် သီရိလင်္ကာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို.မှ သံဃာတော်များသည် နှစ်စဉ်လာရောက်သင်ယူကြ၏။ အနောက်တိုင်းပညာကို သင်ယူခဲ့သော ဦးရွှေဇံအောင်သည် အဘိဓမ္မာကို အနောက်နိုင်ငံများတွင် ပထမဆုံး မျိုးစေ့ချခဲ့သူဖြစ်၏။ ၀ိနည်းနှင့် သုတ္တန်လောက်ကိုသာလျှင် လေ့လာထားကြသော အနောက်နိုင်ငံသားများ အဘိဓမ္မာကို လေ့လာနိုင်ရေး လမ်းခင်းပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အဘိဓမ္မာကို ကျွမ်းကျင်ရန်မှာ လွယ်ကူလှသည် မဟုတ်ပေ။ ဦးရွှေဇံအောင်သည် တစ်ဖက်မှ နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အဘိဓမ္မာကို ဆရာတော်ဦးဂန္ဓမာထံတွင် ၁၉၈၅-ခုနှစ်မှစတင်ပြီး မဆုတ်မနစ် လေ့လာခဲ့၏။ ဦးရွှေဇံအောင်သည် ပညာဗဟုသုတကို အလွန်လိုလားသူတစ်ဦး ဖြစ်သည့်ပြင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို အလွန်ကြည်ညိုသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလွန်ထင်ရှားလှသည့် လယ်တီဆရာတော်ကြီး(၁၈၄၆-၁၉၂၃) ထံတွင် တပည့်ခံပြီး ဗုဒ္ဓစာပေကို သင်ယူသည်။ မြန်မာနှင့် ပါဠိကိုသာ ကျွမ်းကျင်သည်မဟုတ်ပေ။ အင်္ဂလိပ်နှင့် လက်တင်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ဒဿနိကဗေဒကျမ်းများကို နက်နဲစွာလေ့လာသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်၏။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြင်ပတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ထွန်းကားပြန်.ပွားစေရန် ဦးတည်ချက်ဖြင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော The Buddhism Magazine တွင် အဘိဓမ္မာနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ရေးခဲ့၏။ ထိုမဂ္ဂဇင်းသည် အာရှနှင့် ကမ္ဘာတလွှားသို. ထိုးဖောက်နိုင်သည်ကိုလည်း တွေ.ရ၏။ ၀ိနိယနှင့် သုတ္တန်ကိုသာလျှင် လေ့လာနေခဲ့ရသော အနောက်တိုင်းသားများသည် ဦးရွှေဇံအောင်ကြောင့် အဘိဓမ္မာကို စတင်လေ့လာခွင့် ရလာကြသည်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို စတင်မျိုးစေ့ချခဲ့သည့် ဦးရွှေဇံအောင်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို.တွင် ၁၈၇၁-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၀)ရက်နေ.၌ မွေးဖွားခဲ့၏။ အဖ ခရိုင်ရဲဝန် ဦးရွှေသာ၊ အမိ ဒေါ်အဖြူစံတို.၏ သားသမီး လေးယောက်အနက် သားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၈၈၁-ခုနှစ်မှစ၍၊ စစ်တွေမြို. အစိုးရ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားရာ ၁၈၈၅-ခုနှစ်၌ အလယ်တန်းစကောလာရှစ် ဆုကိုရရှိသည်။ ထိုမှတစ်ဖန် ရန်ကုန်မြို.သို. ပြောင်းရွှေ. ပညာသင်ကြားပြန်ရာ ၁၈၈၇-ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်သည်။ ထို.နောက် ရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ယူပြန်ရာ ၁၈၉၁-ခုနှစ်တွင် ထိုခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးဘွဲ.ဖြစ်သော ၀ိဇ္ဇာဘွဲ.ထူးကို ဆွတ်ခူးရရှိသည်။ လိုအပ်သောပညာ ရရှိပြီးနောက် ပညာရေးဌာန၌ ပညာအုပ်အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက် ထမ်းဆောင်သည်။ ထို.နောက် မြေစာရင်းဌာနသို. ပြောင်းရွှေ.ကာ အတန်ကြာ အမှုထမ်းခဲ့ရာ ၁၉၀၂-ခုနှစ်တွင် မြို.အုပ်တန်းခေါ် မြန်မာနိုင်ငံ လက်အောက်ဝန်ထမ်း အဖွဲ.၀င်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ.ခန်.ထားခြင်း ခံရပြန်သည်။ ၁၉၀၇-ခုနှစ်တွင် ၀န်ထောက်တန်းခေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ထမ်းအဖွဲ.သို. တိုးမြှင့်ခန်.ထားခြင်း ခံရပြန်သည်။
ဦးရွှေဇံအောင်သည် အခွန်ဝန်ထောက်အဖြစ် ထမ်းရွက်နေစဉ် ထိုစဉ်က ဖြေရှင်းရန် အလွန်ခက်ခဲသော ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို နေရာချထား၍ မြေခွန်တော် စည်းကြပ်ရေးအတွက် အထူးတာဝန်ကျရောက်၍ ထမ်းဆောင်ရသည်။ ဤပြဿနာကြီးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပေးချက်များကို အစိုးရက အထူးနှစ်သက် လက်ခံခဲ့သည်။ သူ၏ စာအုပ်ပြာခေါ် အစီရင်ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအရာရှိများ အထူးအမှီသဟဲပြု၍ ဖတ်ရှုခဲ့ကြရသည် ဟုဆိုသည်။ ၁၉၁၂-ခုနှစ်တွင် တွံတေးတူးမြောင်း ဖောက်လုပ်ရန်အတွက် မြေသိမ်းအရာရှိအဖြစ် ရွေးချယ်ခန်.အပ်ခြင်း ခံရ၏။ စတင်စည်ကားစ ပြုလာပြီဖြစ်သော သန်လျင်မြို.တွင် မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ.၀င် လူကြီးအဖြစ် ၁၉၁၃-ခုနှစ်တွင် ခန်.ထားခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၁၄-ခုနှစ်တွင် မြေဖက်ဌာန၌ သူ၏ ထူးချွန်စွာ ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရက ထိုခေတ်အနေဖြင့် အရပ်ဘက် ထူးချွန်တံဆိပ် A.T.M အမှုထမ်းကောင်း မင်းဘွဲ.တံဆိပ်ကို သူ.အား ချီးမြှင့်ခဲ့၏။ ၁၉၁၈-ခုနှစ်တွင် ကျောက်တန်း နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်အဖြစ် ထမ်းရွက်နေရင်း ဦးရွှေဇံအောင်သည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စစ်ချေးငွေ အမြောက်အမြား ရှာဖွေ စုဆောင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဦးရွှေဇံအောင်သည် ဟံသာဝတီခရိုင်တွင် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ခရိုင်ဝန်အဖြစ် ထမ်းရွက်ရပြီးနောက် ၁၉၂၀-ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာတော်မင်းကြီး၏ အတွင်းဝန်အဖြစ် ယာယီခန်.အပ်ခြင်း ခံရသည်။ ထို.နောက် သထုံခရိုင်ဝန်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ.ထမ်းရွက်ရာ အထူးပင် လူချစ်လူခင်ပေါများသော အစိုးရအရာရှိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၃-ခုနှစ်တွင် K.S.M ခေါ် ရွှေစလွယ်ရမင်း ဘွဲ.တံဆိပ်ကို ဗြိတိသျှအစိုးရက အပ်နှင်းချီးမြှင့်သည်။ ထို.နောက် မြူနီစပယ် အခွန်တော်များ ကောက်ခံရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းမှု ကော်မတီဝင်အဖြစ် ခန်.အပ်ခြင်း ခံရပြန်ရာ ယင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်က ဦးရွှေဇံအောင်၏ ထူးချွန်ပေါက်မြောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော အရည်အချင်းကို ချီးကျူးခဲ့ရသည်။ မကြာမီ မြန်မာအမျိုးသားများအား မည်သည့်အခါကမှ ခန်.အပ်ခြင်းမပြုခဲ့သည့် ရာထူးဖြစ်သော ယစ်မျိုးမင်းကြီးအဖြစ် ဦးရွှေဇံအောင်သည် ပထမဆုံး ခန်.အပ်ခြင်း ခံရပြန်သည်။
ဦးရွှေဇံအောင်သည် သာသနာတော်ကို အထူးကြည်ညို လေးစားစိတ်နှင့် ကြိုးစားလိုစိတ်တို.ကြောင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်အမျိုးမျိုး ထမ်းဆောင်စဉ် အဘိဓမ္မာကို ဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာ၏ ခြေတော်ရင်းတွင် လေ့လာခဲ့၏။ The Buddhism Magazine ကို ကြီးကြပ်ထုတ်ဝေသည့် အာနန္ဒာမေတ္တယျဆရာတော်ကို အကြောင်းပြု၍ လန်ဒန်ပါဠိအသင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူ မစ္စတာ ရစ်ဒေးဗစ်စ်၏ ဇနီးဖြစ်သူ မစ္စစ် ရစ်ဒေးဗစ်နှင့် စတင်အဆက်အသွယ် ရခဲ့၏။ ဆရာကြီးသည် အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟသဂြိုဟ်ကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို. ပြန်ဆိုပြီး မစ္စစ်ရစ်ဒေးဗစ်ထံ ပို.လိုက်၏။ ယင်းစာမူကို မစ္စစ်ရစ်ဒေးဗစ်နှင့် ဦးရွှေဇံအောင်တို. အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စစ်ဆေးပြင်ဆင်ပြီးမှ ဗုဒ္ဓ၀ါဒမဂ္ဂဇင်း The Buddhism Magazine တွင် ဦးရွှေဇံအောင် ရေးသားသော ဆောင်းပါးကို နိဒါန်းအဖြစ်ထည့်ကာ ၁၉၁၀-ပြည့်နှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာအုပ်ထွက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ပညာရှိများ၏ ချီးကျူးလက်ခံခြင်း ခံရသည်။ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့် မစ္စစ်ရစ်ဒေးဗစ်တို.၏ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနှင့် စပ်လျဉ်းသော အမေးအဖြေများကိုလည်း ဦးရွှေဇံအောင်ပင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုကာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်၍ အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့ရသည်။
ဦးရွှေဇံအောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓကျမ်းစာများကို နိုင်ငံခြားသားများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် ရေးသားရုံမက အနောက်နိုင်ငံ ကျမ်းတစ်ဆောင်ဖြစ်သော လောဂျစ်ကျမ်းကို တက္ကိယနယဒီပနီ အမည်ရှိ ကျမ်းကို ပြုစုရေးသားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်းဂျာနယ်တွင် ၁၉၁၁-ခုနှစ်မှ ၁၉၂၀-ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်းပါးပေါင်း ၃၅-ခုကို ပါဝင်ရေးသား နိုင်ခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးအများစုသည် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာများသာ ဖြစ်ကြ၏။ ဆရာကြီးသည် ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင် တို.ကိုသာမက လက်ဝဲသုန္ဒရ၏ မဲဇာတောင်ခြေရတုကိုပင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့သေးသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်၍လည်း စာအုပ် ၇-အုပ်ကို ပြုစုနိုင်ခဲ့၏။ ၎င်းတို.မှာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားသော-
၁။ ဇရာလက္ခဏာဒိ ဒီပနီကျမ်း
၂။ တက္ကိယနယ ဒီပနီကျမ်း
၃။ ကာယင်္ဂသမ္ဘာရ ဒီပနီကျမ်း
၄။ ရူပ ဒီပနီကျမ်း
၅။ ယမကခေါ် ယမိုက်ကျမ်း
၇။ အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း တို.ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးသည် မြန်မာမှုကို လေးစားသူလည်းဖြစ်၏။
မြန်မာဘာသာကိုသာမက အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပါ အထူးကျွမ်းကျင်သော ဆရာကြီးကို ကမ္ဘာကပါ သိလာကြပြီး ၁၉၃၂-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က D.Litt ဘွဲ.ကို အပ်နှင်းခဲ့၏။ သို.ရာတွင် ဘွဲ.နှင်းသဘင်ကျင်းပရန် ၁၀-ရက်ခန်.အလိုတွင် ဦးရွှေဇံအောင် ကွယ်လွန်ခဲ့၏။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ၁၉၂၄-ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးအတွက် သင်ခန်းစာများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီတွင် ဆရာကြီး ပြောကြားခဲ့သော မှတ်ချက်ကို ဖော်ပြလိုပါသည်။
“ကျွန်တော့်အနေနဲ. အရှေ.တိုင်း အနောက်တိုင်း စာအုပ်တွေကို အတော်များများ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံရဲ. လောကနီတိလောက် ကောင်းတဲ့ကျမ်း မတွေ.သေးပါဘူး၊ မြန်မာစာပေကို အထင်မသေးဖို. လိုပါတယ်။”
Posted by Bay of Arakan at 9:05 AM ,0comments
(၁) နတ်ပူဇော်ခြင်း နားဆင်ရန်
(၂) လောင်းပြိုင်ပွဲ နားဆင်ရန်
(၃) ရိုးရာလက်ထပ်မင်္ဂလာ နားဆင်ရန်
(၄) ငစွေအက နားဆင်ရန်
(၅) ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ပုံ နားဆင်ရန်
(၆) ရခိုင်ရိုးရာအတာသင်္ကြန် နားဆင်ရန်
(၇) ကျင်ပွဲ အပြည့်အစုံ
(၈) သမက်တောင်းခြင်း နားဆင်ရန်
(၉) ရထားဆွဲပွဲ နားဆင်ရန်
(၁၀) ဇန်းစကား နားဆင်ရန်
Posted by Bay of Arakan at 7:28 AM ,0comments
Labels: စာ/ ယဉ်
” . . . အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၌ သာလျှင် အထူး ပေါက်မြောက် ချီးမွမ်းလောက်သော ပဂ္ဂိုလ် မဟုတ်သေး။ မြန်မာဘာသာ - ပေါရာဏနှင့် ဝေါဟာရ စာဟောင်း စာမျဉ်း တို့ကိုလည်း။ အထူးလိုလား လိုက်စားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ။ ယခု နာမည် ထင်ရှားလျက် ရှိသော ပရိုဖက်ဆာ ဆရာလွန်း ထံ၌ တပည့် ခံခဲ့ဖူး၍။ ရှေးဧချင်းဟောင်း ၁၂ စောင်တွဲ စာအုပ် တအုပ်ကို ကိုယ်တိုင် တည်းဖြတ်၍ပင် ရိုက်နှိပ် ဖြန့်ချိ ခဲ့ဘူးလေသည်။ ဤကဲ့သို့ စွယ်စုံပညာဂုဏ် အရည်အချင်းဖြင့် ပြည့်စုံသဖြင့်။ မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသားတို့ ရရှိနိုင်သော ရာထူးများ အနက်။ အကြီးဆုံး ဖြစ်သော ပြည်ထဲရေး အမတ်ကြီး ရာထူးဖြင့်။ အစိုးရတို့၏ ချီးကြူး ခန့်အပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည် ဖြစ်ရာ။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၊ ထင်ရှား ရှိနေခြင်းသည်။ မြန်မာပြည်ကြီး၏ ကြက်သရေပင် ဖြစ်ရကာ။ ယခုကဲ့သို့။ သက်တန်း မစေ့မှီ။ ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ရခြင်းအတွက်။ သာ၍ပင် ဝမ်းနည်းဘွယ် ဖြစ်ချေသည်။ . . . ” . . . [၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ Unity စာပေက ပထမ အကြိမ် အဖြစ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ မောင်ဇေယျာရဲ့ 'ကမ္ဘာသိ မြန်မာများနှင့် ကမ္ဘာသိ မြန်မာ စာအုပ်များ' ကနေ "စွယ်စုံပညာရှင် ဦးမေအောင်" အကြောင်းကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။]
ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် စွယ်စုံ ထူးချွန်သော ပညာရှင် တဦး မှာ ဦးမေအောင် (၁၈၈ဝ - ၁၉၂၆) ဖြစ်သည်။ ဦးမေအောင်သည် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားရေး၊ ပညာရေးနှင့် စာပေ ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ရှေ့တန်းမှ ဦးဆောင်ဦးရွက် ပါဝင်ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။
ဦးမေအောင်သည် နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းတွင် အလွန် အရေးပါခဲ့သော ဝိုင်အမ်ဘီအေ (YMBA) ခေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလျာဏ ယုဝအသင်း (၁၉ဝ၆) ကို ပြုစုပျိုးထောင်သူ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပသော ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းများ အစည်းအဝေးတွင် ချယ်ယာမင် (သဘာပတိ) အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ၊ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် ကာလကတ္တားသို့ အန္ဒိယနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အတွင်းဝန် မွန်တေဂူနှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံရန် ဝိုင်အမ်ဘီအေမှ ရွေးချယ် စေလွှတ်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေး နယ်ပယ်တွင် အစိုးရ ရှေ့နေ တဦး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ဒုတိယမြောက် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တရားဥပဒေ လောကတွင် ထူးချွန် ထက်မြက်သော ဝတ်လုံတော်ရ၊ တရားသူကြီး၊ တရားလွှတ်တော် တရားဝန်ကြီး၊ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်သူ ပညာရှင် တဦးအဖြစ် သတ်မှတ် ခံရသည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် ဥပဒေ ပညာကို အင်္ဂလန်ပြည် ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်၌ သင်ကြားခဲ့၍ ဥပဒေဘွဲ့ (L.L.B) နှင့် မဟာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (M.A) ရခဲ့သည်။ ဝတ်လုံဘွဲ့ (Barrister at Law) ကို လင်ကွန်းအင်း ဥပဒေကျောင်းမှ အောင်မြင်၍ မြန်မာ ပညာရေး ဆင်ဒီကိတ် အဖွဲ့မှ ချီးမြှင့်သည့် ဘီဂန်ဒက် ရွှေတံဆိပ် ရရှိခဲ့သည်။ ထိုဆုမှာ ဘက်စုံ ပညာ ထူးချွန်သူများကို ချီးမြှင့်သည့် အဆင့်မြင့် ပညာရေးဆု တဆု ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဥပဒေ ဌာန၏ ပထမဦးဆုံးသော အချိန်ပိုင်း ဥပဒေ ပါမောက္ခ (၁၉၂၁ - ၂၂) အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စာပေ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးမေအောင်သည် မြန်မာ စာပေ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့ ဓလေ့တို့ကို အထူးရိုသေ လေးစားသူ တဦး အဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ငယ်စဉ်က မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ့ ရာဇဝင်ကို ကျောင်းတွင် ဘာသာရပ် တခု အဖြစ် စနစ်တကျ သင်ကြားခွင့် မရသော်လည်း ဘိလပ်ပြန် ဝတ်လုံတော်ရ ဘဝတွင် မြန်မာ ပညာရှိများထံ တပည့်ခံ၍ လေ့လာ လိုက်စား ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဆရာလွန်း (မစ္စတာ မောင်မှိုင်း) အား ဆရာတင်၍ ပညာရှာခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ပေ၊ ပုရပိုက်တွင် တိမ်မြုပ်နေသည့် ဧချင်းများကို စနစ်တကျ တည်းဖြတ်၍ ဧချင်းဟောင်း ၁၂ စောင်တွဲ အမည်ဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်မြို့ ရမ္မာပူရ စာပုံနှိပ်တိုက်တွင် ပုံနှိပ်၍ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရမ္မာပူရ စာပုံနှိပ်တိုက်မှာ ယောက္ခမ ဦးထွန်းဖြူပိုင် ပုံနှိပ်တိုက် ဖြစ်သည်။ ဧချင်းဟောင်း ၁၂ စောင်တွဲတွင် -
1. ရခိုင်မင်း (အဒူမင်းညို)
2. သခင်ထွေး ဧချင်း (ရှင်သူရဲ)
3. မင်းတရား ရွှေထီး ဧချင်း (လှော်ကားသုံးထောင်မှူး)
4. မင်းတရား ရွှေထီးနားတော်သွင်း ဧချင်း (လှော်ကားသုံးထောင်မှူး)
5. မင်းတရားမယ်တော် ဧချင်း (နဝေူဒကြီး)
6. နတ်သျှင်မယ်တော် ဧချင်း (ဆီးကိုင်းစား)
7. မဟာဥပရာဇ ဧချင်း (တလုပ်မြို့စား)
8. မင်းရဲကျော်စွာစုန် ဧချင်း (ရာဇဗာဟု)
9. သခင်ကြီး ဧချင်း (ပယ်သူငယ်စား ရှင်မြတ်ခေါင်)
10. ယိုးဒယား မိဖုရား ဧချင်း (နဝဒေးကြီး)
11. မင်းရဲနရာ ဧချင်း (မင်းဇေယရန္ဈမိတ်)
12. မင်းရဲဒိဓ္ဓ ဧချင်း (ရှင်သံခို) တို့ ပါဝင်သည်။
ဦးမေအောင် တည်းဖြတ်သော ဧချင်းဟောင်း ၁၂ စောင်တွဲ ထွက်ပေါ် လာသောအခါ မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်းဂျာနယ် (JBRS) အတွဲ ၂၊ အပိုင်း ၁ (၁၉၁၂) တွင် ပါမောက္ခ ဒူရွိုင်ဆယ် (Mon. C. Duroiselle) က Old historical ballad (1) အမည်ဖြင့် အကျယ်တဝင့် ရေးသား ချီးကျူးပါသည်။ တည်းဖြတ်သူ ကိုယ်တိုင် နိဒါန်း၊ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ နောင်အခါ မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်းက တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာကျမ်းပေါင်း ၄၆ ကျမ်း၏ ရှေ့ပြေးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုအချိန်က မြန်မာစာပေ အားပေးမှု အဆင့်အတန်းမှာ များစွာ နိမ့်ကျ မျက်နှာငယ်စရာ ဦးမေအောင် ကဲ့သို့ ဘိလပ်ပြန် ဝတ်လုံတော်ရ တဦးက မြန်မာစာပေကို အလေးမူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသည် ဂုဏ်ယူဖွယ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဦးမေအောင်သည် ဝိုင်အမ်ဘီအေက ကြီးမှူး ဖွင့်လှစ်သော မြန်မာ ကဗျာလင်္ကာ သင်တန်းများတွင်လည်း ပါဝင် ပို့ချခဲ့ပါသည်။
၁၉၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပဲခူးခရိုင် ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး ရုံး၌ ဗြိတိသျှ ပဋိညာဉ်ခံ အရာရှိများ ရွေးချယ်ရန် စုံစမ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲ တခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော ဘိလပ်ပြန် ဝတ်လုံတော်ရ ဦးမေအောင်သည် ရိုးရာ ခေါင်းပေါင်းဖြူဖော့လုံး၊ ထိုင်မသိမ်း အင်္ကျီ၊ တောင်ရှည် ပုဆိုးတို့ကို မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အတိုင်း ဝတ်ဆင်ခဲ့ရာ သူရိယ သတင်းစာ အယ်ဒီတာ ဆရာလွန်းသည် အားရဝမ်းသာ ‘ပဋိညာဉ်ခံဘွဲ့ တေးထပ်’ ရေး၍ ချီးကျူးခဲ့သည်။ ယင်းတေးထပ်ကို သူရိယ သတင်းစာ (၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၁၃) တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
“မျိုးမြန်မာ ညှိုးရှာခဲ့ပြီမို့၊ ကိုးရာမဲ့ချိန်တွင်၊
ရိုးရာကွယ့်မတိမ်ချင်တယ်၊ ပဋိညာဉ်ခန့်ပွဲ။ ။
မြင်ရချက် ကိုယ်သဏ္ဌာန်မှာ၊ ဗိုလ်ဆံ ဆံ များကြားသဘဲ။ ။
နန်းစရိုက် ကျမ်းသိုက်နွယ်တယ်၊ လွမ်းလိုက်ဖွယ်တပွဲ။ ။
မန်းဂိုက်နှယ်ဆင်နွှဲလို့၊ သွင်တနဲတင့်အောင်။ ။
ဖော့လုံးဖြူ မြိုင်မြိုင်ထိန်းပါလို့၊ ထိုင်မသိမ်းဝတ်လို့မြင်ယောင်။ ။
မင်းတပါး ဦးမေအောင်မှာ၊ မှူးကေသျှောင် သဒ္ဓါမြို့ပါလို့၊
မြန်မာတို့ ကိုးကြစရာ၊ ဖြိုွးွ့ကသမ္ဘာ၊
သြဘာဆုခွန်းလှစ်ဖြာတယ်၊ သွန်းမေတ္တာလောင်းပါရဲ့လေး။ ။”
ဦးမေအောင်၏ ထင်ရှားသော ဥပဒေ စာအုပ်မှာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓမ္ဓသတ် ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်သည့် A Selection of Leading Cases on Buddhist Law ဖြစ်သည်။ ယင်းစာအုပ်ကို ၁၉၁၄ တွင် Part I. Matrimonial Law၊ ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် Part II. Adoption, Pre-emption Gift, and Religious Usage၊ ၁၉၁၉ တွင် Part III. Succession and Inheritance ဟူ၍ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေပြီး ၃ ပိုင်းကို ပေါင်း၍ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ပုံနှိပ်သည်။ ဒုတိယ အကြိမ်မူတွင် တည်းဖြတ်သူ မောင်အေးမောင် M.A., LL.B (Cantab) of Middle Temple, Barrister-at-Law ဖြစ်သည်။ မောင်အေးမောင်မှာ ထက်မြက်သော ဥပဒေ ပညာရှင် ဖဆပလခေတ် တရားရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အေးမောင် ဖြစ်သည်။ ဦးမေအောင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓမ္မသတ် ဥပဒေ စာအုပ်ဖြင့် ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (L.L.M) ထပ်မံ ချီးမြှင့် ခံရသည်။
ဦးမေအောင်၏ စွယ်စုံ ထက်မြက်သော အရည်အချင်းများကို ထောက်၍ ထိုခေတ် အုပ်ချုပ်သူ ဗြိတိသျှ ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်း၊ အိုင်စီအက်စ် ဝန်ထမ်းများကပင် မြန်မာ တိုင်းရင်းသာတို့၏ ပင်ကိုဉာဏ် ထူးချွန် ထက်မြက်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်တန်း မြင့်မားမှုတို့ကို ဝန်ခံခဲ့ကြသည်။ ပညာရေး နယ်ပယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တခုတည်းသော သက်တမ်းရှည်ကြာ ကျန်ရစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်း (၂၉ မတ် ၁၉၁ဝ) ကို တည်ထောင်ခဲ့သူများတွင် တဦး အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ အသင်းကြီး၏ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို အားသွန်ခွန်စိုက် တက်တက်ွ့ကွ့က အမြဲပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။ အသင်းကြီး၏ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးများ၊ ဆပ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများတွင် အစဉ်အမြဲ ဆွေးနွေး အကြံပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းများကို ပေး၍ အသင်း လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြုပ် ထားနိုင်သူ ဟုလည်း သတ်မှတ်ခံရသည်။ အထူးသဖြင့် စကားပြော ကောင်းသူ၊ သွက်လက်သူ၊ စွယ်စုံ ထူးချွန်သူဟု ထင်ရှားသည်။ ကျောက်စာဝန် မစ္စတာ တော်စိန်ခိုသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်း သုတေသန တွေ့ရှိချက် အထောက်အထားများနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ် ယဉ်ကျေးမှု သြဇာ အလေးပေး တင်ပြတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကန့်ကွက် ဆွေးနွေးလေ့ ရှိသူ တဦး ဖြစ်သည်။ ထိုကန့်ကွက်ချက်များကို အသင်းမှ ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်း ဂျာနယ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဦးမေအောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်းကြီး၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် နှစ်ပေါင်များစွာ ရွေးချယ် ခံခဲ့ရရုံမျှမက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆပ်ကော်မတီဝင်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် သုတေသန ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ တာဝန်များကိုပါ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အသင်းမှ ကြီးမှူး ကျင်းပသော မြန်မာစာပေ ပြိုင်ပွဲများတွင် အကဲဖြတ် လူကြီး၊ ဆုငွေအတွက် အလှူရှင်၊ မြန်မာကျမ်းများ ပုံနှိပ် တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေရေး အဖွဲ့ သဘာပတိ တာဝန်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အသင်းမှ ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်း ဂျာနယ်တွင် စာအုပ် ဝေဖန်ချက်၊ စုံစမ်း မေးမြန်းချက် မှတ်စုတို၊ အယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာနှင့် သုတေသန ဆောင်းပါးများ ရေးသာခဲ့ရာ ယင်းတို့မှာ -
1. ‘Inaugural address.’ JBRS. Vol.1, (Jun 1911) P.2-9.
2. . ‘Shwe Zan Aung’s logic in Burmese (Myanmar)’ JBRS. Vol.1, Pt.1 (June 1911) P. 113-117
3. ‘Note on Saya Thein’s Shin Sawbu.’ JBRS. Vol.1, Pt.2 (Dec 1911) P.16-18
4. ‘Critical note on Mr.Taw Sein Ko’s paper on ‘The Chinese antiquities of Pagan.(Bagan).’ JBRS. Vol.1, Pt.2 (Dec 1911) P.43-46.
5. ‘Shwe Nat-Taung Thamaing. ‘JBRS. Vol.1, Pt.2 (Dec 1911) P.56-57.
6. ‘Name of Burmese(Myanmar)Kings.’ JBRS. Vol.1, Pt.1 (June 1911) P.83-84.
7. ‘Garu and Lahu.’ JBRS. Vol.1, Pt.1 (June 1911) P.88-91
8. ‘The chronology of Burma(Myanmar).’ JBRS. Vol.2, Pt1 (June 1912) P.8-29
9. ‘Prome and Pyus’. JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P.72-74
10. ‘Origin of the world”Talaing”.’ JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P. 73-74
11. ‘To the editor,Rangoon (Yangon) Gazette’. JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P. 80-81, 83-84, 86-87
12. ‘Burmese(Myanmar) prosody’. JBRS. Vol.2, Pt.1 (June 1912) P.92-93
13. ‘The Burmese (Myanmar)era.’ JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P.197-203
14. ‘Note to the legend of the Kyaukwaing Pagoda.’ JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P.217
15. ‘Burmese spelling’. JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P. 260-262
16. ‘Archaeology in Burma (Myanmar).’ JBRS. Vol.2, Pt.2 (Dec 1912) P. 267-269.
17. ‘Burmese sketches.’ JBRS. Vol.3, Pt.2 (Dec 1913) P. 191-192.
18. ‘The derivation of Ramanna.’ JBRS. Vol.4, Pt.2 (Dec 1914) P. 148.
19. ‘Note on Saya Thein’s Let-we-thondara.’ JBRS. Vol.6, Pt.2 (Dec 1916) P.9.
20. ‘Some Mon Place-names.’ JBRS. Vol.7, Pt.2 (Dec 1917) P. 143-145.
မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်း ဂျာနယ်တွင် ဦးမေအောင် ရေးသာခဲ့သော ဝေဖန်ချက်၊ မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ သုတေသန စာတမ်းများ အနက် မွန်ဒေသ အမည်များ (Some Mon Place- name’s) နှင့် မြန်မာပြည် ရက်စွဲသမိုင်း (Chronology of Burma) တို့မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်နှင့် အမျှ ပညာရှင်များ၏ နှစ်သက်ခြင်း ခံရသည်။ မွန်ဒေသ အမည် အချို့တွင် အောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရန်ကုန်၊ ကမာရွတ်၊ အင်းစိန်၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ ကျိုက္ကဆံ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ကော့ချဲ၊ ဓားပိန်၊ ပဲခူး၊ ဇိုင်ဂနိုင်၊ စစ်တောင်း၊ မုတ်ပလင်၊ ကျိုက်ကသာ၊ ကျိုက်ထို၊ သထုံ၊ ဇင်းကျိုက်၊ ပေါင်၊ မုတ္တမ၊ မော်လမြိုင်၊ ထားဝယ်၊ တနင်္သာရီ၊ မှော်ဘီ၊ သာယာဝတီ၊ တာပွန်၊ သံလျှင်၊ ဒလ၊ ခနောင်တို၊ တွံတေး၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံ၊ ညောင်တုန်း၊ ကျုံပျော်၊ ပုသိမ် ဒေသ အမည် ၃၃ မျိုး၏ မွန်ဝေါဟာရ ရင်းမြစ်များကို တင်ပြထားပါသည်။ မြန်မာပြည်ရက်စွဲ သမိုင်း သုတေသန စာတမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာရေး ရည်ညွှန်းကျမ်း ၁၇ ကျမ်း၊ မြန်မာဘာသာရေး ရာဇဝင် သမိုင်းကျမ်း ၂၅ ကျမ်းကို စနစ်တကျ ကိုးကား၍ ဘီစီ ၈ ရာစုခန့် တကောင်းဒေသတွင် အဘိရာဇာ နန်းစိုက်သည်မှ အေဒီ ၁၇၅၂ ရွှေဘိုတွင် အလောင်းမင်းတရား ကုန်းဘောင်ဆက် စတင်သည် အထိ ရက်စွဲ သက္ကရာဇ်ဖြင့် မြန်မာ့သမိုင်းကို ရေးသားထားသည်။ ကိုးကား ရည်ညွှန်းရာ မြန်မာ ရာဇဝင်ကျမ်း ၂၅ ကျမ်းတွင် ဦးကုလား ရာဇဝင်၊ တွင်းသင်း ရာဇဝင်၊ ရာဇဝင်ကျော်၊ သံလျင်ရာဇဝင်၊ မဟာမုနိသမိုင်း၊ မဟာဇေယျ၏ ရခိုင် ရာဇဝင်၊ ရခိုင် မင်းသမီး ဧချင်း တို့မှာ ပုံနှိပ်မူ မထွက်သေး၍ ပေးမူများကို လေ့လာပြီး ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဦးမေအောင် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ချန်တွင် ပါဠိ ပါမောက္ခ ဦးဖေတင်မောင်က သုတေသန ဂျာနယ်တွင် ဝမ်းနည်း မှတ်တမ်း ရေးသောအခါ “ဦးမေအောင်သည် သုတေသန နယ်ပယ်တွင် ဇောက်ချခဲ့လျှင် ပထမတန်းစား သုတေသန ပညာရှင် အဖြစ် တွေ့နိုင်ကြောင်း” The Chronology of Burma (Myanmar) စာတမ်းကို ထောက်၍ မှတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။
ဦးမေအောင်၏ အခြား ထင်ရှားသော ယဉ်ကျေးမှု စာတမ်းမှာ ၁၉၁ဝ ခုနှစ် လန်ဒန်မြို့ လွိုက်ကရိတ်တာ ဗြိတိန် ပုံနှိပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသည့် Twentieth Century Impression of Burma (Myanmar) ၂ဝ ရာစု မြန်မာ့ ပုံရိပ်တွင် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ဆိုင်ရာ ‘Burmese (Myanmar) Manners and Customes’ စာတမ်း ဖြစ်သည်။
ဦးမေအောင်ကို ၁၈၈ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့၌ အဖ ဦးသာဒိုးဖြူး၊ အမိ ဒေါ်နှောင်းဒွေးတို့မှ ဖွားသည်။ မွေးချင်း ၄ ယောက်တွင် ဒုတိယမြောက် သားဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကပင် မိဘများ ကွယ်လွန်၍ အမေ့ဘက်မှ ဦးကြီး ဖြစ်သူ ဦးလှအောင်၊ ဒေါ်မြမေတို့က အိန္ဒိယသို့ ခေါ်ယူ၍ ကာလကတ္တားတွင် ပညာ သင်ခဲ့ရသည်။ ဦးလှအောင်မှာ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ ထဲမှ တဦးတည်းသော မဒရပ် ငွေတိုက် မင်းကြီး အဖြစ် အမှု ထမ်းရွက်ခဲ့ရ၍ ငွေစာရင်း မင်းကြီး ဦးလှအောင် အဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ဒေါ်မြမေမှာ စစ်ကဲ ဦးထော်လေး၏ သမီးဖြစ်၍ မင်းကြီးကတော် ဒေါ်မြမေဟု လူသိများသည်။ ဦးမေအောင်မှာ စစ်ကဲ ဦးထော်လေး၏ ဒုတိယ အိမ်ထောင်မှ မွေးဖွားသည့် သမီး ဒေါ်မြမေ၏ ခင်ပွန်း ငွေတိုက်မင်းကြီး ဦးလှအောင်၏ တူဖြစ်သည်။ ဦးမေအောင်သည် ကာလကတ္တားနှင့် ရန်ကုန် အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ပညာသင်၍ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ၌ မြန်မာစာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ပထမရ သဖြင့် ရနောင်း ဘုရင်ခံဆု ချီးမြှင့်ခံရသည်။ ရန်ကုန် ကောလိပ် အက်ဖ်အေ (ဥပစာတန်း) တွင် ပထမရ၍ ဂျားဒင်းဆု ထပ်မံ ရရှိသည်။ ၁၈၉၈ ခုနှစ်၊ ဘီအေ နောက်ဆုံးတန်းတွင် ပညာ သင်နေစဉ် ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်း၍ ကျောင်းမှ ထွက်ခဲ့ရသည်။ ၁၉ဝ၂ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယတန်း ရှေ့နေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့ ရမ္မာပူရ စာပုံနှိပ်တိုက် ဦးထွန်းဖြူ၊ ဒေါ်မေတို့၏ သမီး မသိန်းမြနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်မေမှာ အခွန်ဝန် ဦးအုန်းရွှေ၊ ဒေါ်မျှား၏ သမီး ဖြစ်သည်။ ဒေါ်မျှားမှာ စစ်ကဲကြီး ဦးထော်လေးနှင့် ပထမ အိမ်ထောင်ဆက် ဒေါ်မင်းလူတို့မှ ဖွားမြင်ရာ ဒေါ်သိန်းမြမှာ စစ်ကဲကြီး ဦးထော်လေး၏ မြစ်ဖြစ်သည်။
ဦးမေအောင်သည် မြိတ်မြို့ အထက်တန်းကျောင်း အထက်တန်းပြ၊ မော်လမြိုင်မြို့ ရှင်မဗုဒ္ဓဃောသ အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်၊ ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကုန် မော်တင်လမ်း ဦးရွှေအိုးရေခဲစက်နှင့် သစ်ဝါးရောင်းဝယ်ရေး မန်နေဂျာအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉ဝ၂ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယတန်း ရှေ့နေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးနောက် ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ တော်စပ်သူ ဦးဘလှအောင် (ငွေစာရင်း မင်းကြီး ဦးလှအောင်၊ မင်းကြီးကတော် ဒေါ်မြမေတို့၏ တဦးတည်းသောသား) နှင့်အတူ ‘အောင်နှင့် အောင်’ အမည်ဖြင့် ရှေ့နေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည်။
၁၉ဝ၄ ခုနှစ်တွင် ဦးဘလှအောင်နှင့် အတူ အင်္ဂလန်သို့ ဥပဒေ ပညာသင် ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ၁၉ဝ၄ မှ ၁၉ဝ၇ ခုနှစ် အတွင်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ (LL.B)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (M.A) နှင့် လင်ကွန်းအင်း ဥပဒေ ကျောင်းမှ ဘာရစ်စတာ အက်ထ်လော (Barrister-at-Law) ဝတ်လုံဘွဲ့များကို ထူးချွန်စွာ ရရှိခဲ့၍ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ဆင်ဒီကိတ် အဖွဲ့၏ ဘက်စုံ ပညာ ထူးချွန်ဆု ဘီဂန်ဒက် ရွှေတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံရသည်။
၁၉ဝ၈ မှ ၁၉၂ဝ အတွင်း ဘိလပ်ပြန် ဝတ်လုံတော်ရ အဖြစ် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြု၍ ဝိုင်အမ်ဘီအေ (YMBA) ခေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလျာဏယုဝ အသင်းကြီးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဘိလပ်ပြန် ဝတ်လုံတော်ရ ဦးပု (နန်းရင်းဝန် ဦးပု)၊ ပညာဝန် ဦးမုန်း၊ အငြိမ်းစားဝန်ထောက် ဦးဖေတို့နှင့် အတူ ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းများ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရေး အတွက် နယ်များသို့ ဆင်း၍ တရားဟောရာ ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းကြီး၏ ရှေ့တန်း ဦးဆောင်သူ တဦး ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၁၁့ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသော အရပ်ရပ် ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းများ အစည်းအဝေးကြီးတွင် ချယ်ရာမင် (သဘာပတိ) အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ် ဟင်္သတမြို့တွင် ကျင်းပသော စတုတ္ထ အကြိမ် ညီလာခံတွင် အစည်းအဝေး သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဦးဖေ၊ ဦးဘဘေ၊ ဝတ်လုံတော်ရ ဦးစု (မန္ဈလေး) တို့နှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားသို့ သွားရောက်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အတွင်းဝန် မွန်တေဂူကို တွေ့ဆုံပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးကို တင်ပြခဲ့သည်။
ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းကြီးသည် မူလ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သော အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိစ္စများတွင် သာမက နိုင်ငံရေး ကိစ္စများကို ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်လာရာ နိုင်ငံရေး မဆောင်ရွက်လိုသူ လူကြီး အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံရေးကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လိုသူ လူငယ် အဖွဲ့ ကွဲပြားလာသည်။ လူကြီး အဖွဲ့ကို ‘တူ သာ သင်း’ (ဦးဘတူ၊ ဦးဖိုးသာ၊ ဦးသင်း) တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ရာ ဦးမေအောင်သည် လူကြီး အဖွဲ့ဘက်သို့ ပါဝင်ခဲ့ရာမှ ၁၉၂ဝ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ လက်ထောက် ရှေ့နေ၊ ဥပဒေ သုံးသပ်ရေး အရာရှိ၊ ဥပဒေအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ အစိုးရ ရှေ့နေ၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာန အချိန်ပိုင်း ပါမောက္ခ၊ ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် တရားလွှတ်တော် တရားဝန်ကြီး၊ ၁၉၂၄ တွင်ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ဗြိတိသျှ အစိုးရ၏ သူကောင်းပြုခြင်း ခံရသည်။ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့၌ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဦးမေအောင်တွင် သားသမီး ၃ ဦး ထွန်းကား၍ သားကြီး သတိုးအောင်မှာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဘီအေ နောက်ဆုံးနှစ်တွင် ပညာ သင်ကြားနေစဉ် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သတိုးအောင်မှာ ပညာထူးချွန်၍ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စဉ်က ဖခင် ဦးမေအောင် ကဲ့သို့ ရနောင်း ဘုရင်ခံဆု ရရှိခဲ့သည်။ သားငယ် ထွန်းလှအောင်မှာ ကိုလိုနီခေတ် အုပ်ချုပ်ရေး လောကတွင် ထင်ရှား၍ လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ဦးတွင် ရဲမင်းကြီး ဦးထွန်းလှအောင် ဖြစ်သည်။ သမီးငယ် မမြစိန်မှာ မြန်မာ အမျိုးသမီးများ ထဲမှ ပထမဦးဆုံး အမ်အေ (သုတေသန အထူးပြု) ဘွဲ့၊ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ဘီလစ်ဘွဲ့များ ရခဲ့သော သမိုင်း ပညာရှင် တဦး ဖြစ်သည်။ ဥပစာတန်းတွင် ပထမရ၍ ဖခင်ကဲ့သို့ ဂျားဒင်းဆု ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။
ဦးမေအောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ဆင်ဒိကိတ် အဖွဲ့ဝင်၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကောင်စီဝင်၊ တက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် တဦး ဖြစ်၍ ကရက်ဒေါက် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ရရာ အချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထင်မှား အမြင်မှား ခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမေအောင် ကွယ်လွန်သည့် အခါ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်၊ ဒုတိယတွဲ နံပါတ် ၂ (၁၂ ဇွန် ၁၉၂၆ ) တွင် ဒီးဒုတ် ဂျာနယ် တည်းဖြတ်သူ ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုက အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထဲရေး ဌာန ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမေအောင်သည် ဇွန်လ ၅ ရက်၊ စနေနေ့ ည ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင်၊ မေမြို့ (ပြင်ဦးလွင်) ရှိ နေအိမ်၌ အနိစ္စရောက်ကြောင်း ကြားသိရသော ကျွန်ုပ်တို့မှာ။ အထူးဝမ်းနည်း နှစ်မြောမိသည် ဖြစ်ရာ။ ထိုသတင်းကို ကြားသိရသော တိုင်းရင်းသား မှန်သမျှတို့မှာ။ ကျွနိုပ်တို့ ကဲ့သို့ပင် ဝမ်းနည်းလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပေကြောင်း။ သွားလေသူ ဦးမေအောင်မှာ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၌ သာလျှင် အထူး ပေါက်မြောက် ချီးမွမ်းလောက်သော ပဂ္ဂိုလ် မဟုတ်သေး။ မြန်မာဘာသာ - ပေါရာဏနှင့် ဝေါဟာရ စာဟောင်း စာမျဉ်း တို့ကိုလည်း။ အထူးလိုလား လိုက်စားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ။ ယခု နာမည် ထင်ရှားလျက် ရှိသော ပရိုဖက်ဆာ ဆရာလွန်း ထံ၌ တပည့် ခံခဲ့ဖူး၍။ ရှေးဧချင်းဟောင်း ၁၂ စောင်တွဲ စာအုပ် တအုပ်ကို ကိုယ်တိုင် တည်းဖြတ်၍ပင် ရိုက်နှိပ် ဖြန့်ချိ ခဲ့ဘူးလေသည်။ ဤကဲ့သို့ စွယ်စုံပညာဂုဏ် အရည်အချင်းဖြင့် ပြည့်စုံသဖြင့်။ မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသားတို့ ရရှိနိုင်သော ရာထူးများ အနက်။ အကြီးဆုံး ဖြစ်သော ပြည်ထဲရေး အမတ်ကြီး ရာထူးဖြင့်။ အစိုးရတို့၏ ချီးကြူး ခန့်အပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည် ဖြစ်ရာ။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၊ ထင်ရှား ရှိနေခြင်းသည်။ မြန်မာပြည်ကြီး၏ ကြက်သရေပင် ဖြစ်ရကာ။ ယခုကဲ့သို့။ သက်တန်း မစေ့မှီ။ ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ရခြင်းအတွက်။ သာ၍ပင် ဝမ်းနည်းဘွယ် ဖြစ်ချေသည်။ အထင်မမှားအပ်ပေ
ဦးမေအောင် - ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ် ရထူးကို ထမ်းရွက် နေခိုက်၌၊ တိုင်းသူ ပြည်သားတို့နှင့် တဘက်တလမ်း ပြုလုပ်သည်ဟု အချို့သော သတင်းစာများ၌ စွပ်စွဲချက် အရ။ သွားလေသူ ဦးမေအောင် အပေါ်၌ အထင် မမှားအပ်ပေ။ ဦးမေအောင်သည်။ အစိုးရ အမှုထမ်း အဖြစ်သို့ မရောက်မှီ။ ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်း၌။ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဖြင့်ပင် အတော်ကြာ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့်ပြင်။ ဝတ်လုံ အတတ်ကို။ အင်္ဂလန်ပြည်သို့ သွားရောက် သင်ကြားပြီးနောက်။ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်၍ ရောက်ရှိသော ဝတ်လုံများ အနက်။ မိမိတို့ မျိုးရိုးဇာတိ အဝတ်အစားကို မပြောင်းလဲဘဲ။ အမြဲဝတ်ဆင်လေ့ ရှိသူမှာ။ ဦးမေအောင်ပင် ဖြစ်ရကာ။ ဤကဲ့သို့ မျိုးရိုး ဇာတိကို ရိုသေသော ပညာရှိ တယောက်သည်။ မိမိ အလိုအလျောက်အားဖြင့်။ တိုင်းသူပြည်သားတို့ ဆန့်ကျင်၍။ တိုင်းပြည် ပျက်စီးအောင် ပြုလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်အပ်ပေ။ မိမိထမ်းရသော ရာထူး၏ အခွင့် ရှိသလောက်သာလျှင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ဖြစ်ရာ၊ ဦးမေအောင်၏ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့သည်။ တိုင်းသူ ပြည်သားတို့၏ အလိုနှင့် ဆန့်ကျင်ခဲ့သော။ အုပ်ချုပ်ခြင်း စည်းစနစ် ဖြစ်သော ဒိုင်အာကီကို သာလျှင် အပြစ်တင် ထိုက်ပေသည်။ (မူရင်းသတ်ပုံ အတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by Bay of Arakan at 11:57 AM ,0comments
အခုတလော မတင်မေတစ်ယောက် အရမ်းစိတ်ညစ်နေရတယ်။ အိမ်က ကိုပေါက်ကျော်နဲ့က လုံးဝ အဆင်မပြေဘူးလေ။ တကယ်တော့ ကိုပေါက်ကျော်ဆိုတာက အိမ်မှာခြံစောင့်ဖို့ ခေါ်ထားတဲ့ အလုပ်သမား တစ်ယောက်ပါ။ မိဘများဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက်၊ အဖော်များရလေမလားလို့ အိမ်မှာဆက်ထားမိပါတယ်။ မသမာတဲ့ ဥာဏ်နဲ့ အကောက်ကြံလိုက်တော့ အားနွဲ့သူမိန်းမသား မတင်မေမှာ အမှတ်တမဲ့နဲ့ ချောင်ပိတ် ခံလိုက်ရတာပေါ့။
ဒါပေမယ့်လဲ မတင်မေကသည်းခံပါတယ်။ မလွှဲသာမရှောင်သာ၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင် ဦးစီးနေရာ အတင်းဝင်ယူ ထားတဲ့၊ ကိုပေါက်ကျော်အပေါ်မှာ စိတ်မကွက်ပဲ အိမ်ရှင်မတာဝန် ကျေပွန်ရှာပါတယ်။
အဲ.. ကိုယ့်နေရာကိုယ်မသိပဲ စိတ်ဖောက်ပြန်နေတာကတော့ ကိုပေါက်ကျော်ပဲပေါ့။ ကြောင်တောင်တောင် ပေါက်တောက်တောက်နဲ့ဒီလိုသိပ္ပံခေတ်ကြီးမှာ သူ့ ကိုယ်သူ ဘုရင်မင်းတရားကြီးလို့လဲ ပြောလားပြောရဲ့။ သူ့အိမ်စုတ်လေးကို နေပြည်တော်ကြီးပါဆိုပြီး အရပ်တကာ လှည့်ကြွားနေတာ ဆိုတော့ အရပ်နဲ့ကလဲ သိပ်တည့်တာ မဟုတ်ဘူး။ မူးယစ်ရမ်းကားပြီး မတင်မေလေးကို နှိပ်စက်လိုက်တာလဲ မပြောပါနဲ့ တော့။
အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ့်အရိပ်မှာရှိနေတဲ့ မတင်မေအပေါ် မတရားရမ်းကား နှိပ်စက်နေတာတွေ အရပ်က မကြားရက်ပဲ ကြားနေရတာဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ သူများ အိမ်တွင်းရေးကို အကြမ်းပတမ်း ဝင်မစွက်ချင်ကြလို့သာ ကိုပေါက်ကျော်ကို ခဏ ခဏ ခေါ် ခေါ်တွေ့ ပြီး နားချတဲ့နည်းကို သုံးနေကြတာ။
ဒါတောင် ကိုပေါက်ကျော်က ကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူး။ စေတနာနဲ့ ပြောတဲ့လူတွေကိုများ ‘အိမ်တွင်းရေး ဝင်စွက်တဲ့လူတွေ၊ အနှောင့်အယှက်တွေ’ဆိုပြီး သူ့အိမ်လုံခြုံရေး စိုးရိမ်သတဲ့လေ။ တကယ်ဆို ဒီအိမ်မှာက သူရယ်၊ မတင်မေရယ် နှစ်ယောက်တည်းရှိတာ။ ရှိတဲ့ မတင်မေကိုလဲ သူကပဲ နှိပ်စက်နေတာဆိုတော့ အိမ်ရဲ့လုံခြုံရေးဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ သူ့ လုံခြုံရေးပဲပေါ့။
အချိန်တန်လို့ အရပ်ကမနေနိုင်ပဲ သူ့ကို ဝိုင်းရိုက်မှာတော့ ကြောက်တတ်သား။ သူများကို ရိုက်တတ်၊ နှိပ်စက်တတ်တဲ့ လူတွေဟာ၊ သူကိုယ်တိုင် အရိုက်ခံရမှာ၊ နှိပ်စက်ခံရမှာကိုတော့ သေမလောက် ကြောက်တတ်ကြတာ သဘာဝပဲကိုး။ အဲဒါနဲ့ပဲ အိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့ ဆိုပြီး၊ ဓား၊ လှံ လက်နက်တွေ စုနေလိုက်တာ တစ်အိမ်လုံးလဲ လက်နက်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါရောလား။
တစ်နေ့မှာ မတင်မေလေးဟာ တခြားခြံတွေကို လှမ်းကြည့်နေရင်း ကြီးမားလှတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေကို တွေ့သွားတယ်။ ‘အရွက်တွေကလဲ တဖားဖား၊ အသီးတွေကလဲ တဝင်းဝင်းနဲ့ ကြီးမား ခန့်ထည်နေလိုက်တာ’ အံ့မခန်းပါကလား။ သူမလဲ မနေနိုင်တော့ပဲ ဟိုဘက်ခြံက ဒေါ်ယိုးဒယားမကြီးကို ဘာပင်လဲ လှမ်းမေးတာပေါ့။ “ဒီမိုပင်”လို့ပြောပြီး အသီးတစ်ချို့ ပါလာပေးတယ်လေ။
ကိုပေါက်ကျော်ကြီး ကျွေးသမျှသာ မဝရေစာ စားနေရတာကြာပြီဆိုတော့ အသီးတွေကစားလို့ ကောင်းလိုက်တာမှ ။ ‘အိမ်မှာသာ ဒီအပင်မျိုးရှိရင် ဝဝလင်လင်စားရမှာ’ ဆိုပြီး ဒေါ်ယိုးဒယားမကြီးကို မေးကြည့်တော့ ရွာအနောက်ပိုင်းက မျိုးစေ့ရတာတဲ့။ အရမ်းကောင်းတဲ့အသီးမို့လို ရွာအနောက်ပိုင်း လူတွေက သူတို့လို စားစေချင်တယ် ဆိုပြီး မျိုးစေ့တွေ အလကားပေးနေတာဆိုပဲ အပင်ရှင်သန်အောင် စိုက်နည်း တွေပါ ပြောပြပေးသတဲ့။
မတင်မေရဲ့ အပျော်ဓာတ်လေးမကြာလိုက်ပါဘူး။ “ဒီမို”ဆိုတဲ့ အသံလေးစထွက်တာနဲ့ပဲ၊ တုတ်ဆွဲပြီး ထရိုက် နေလိုက်တာ မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ အခန်းထဲလဲ ထည့်ပိတ်လားပိတ်ရဲ့။ ထွက်ခိုင်းလိုက်၊ ထပ်ရိုက်လိုက်၊ ပြန်ထည့်ပိတ်လိုက်နဲ့ မတင်မေလေးမှာ တော်တော်ခံလိုက်ရပါပကော။
ဒါပေမယ့်လဲ သူလေးက ဇွဲကောင်းရှာပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောမရတဲ့အဆုံး အပင်လေးကို တူတူစိုက်ပါ့မယ် ဆိုပြီး တောင်းပန်ပြောရှာတယ်။ ဒါတောင် ကိုပေါက်ကျော်က လှည့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ သူလဲ ဒီလိုအပင်မျိုး စိုက်နေတယ်ဆိုပဲ။
ဟုတ်များဟုတ်မလားလို့ သွားကြည့်လိုက်တော့ ‘ဒီမိုပင်မှမဟုတ်တာ’။ အဲဒီ ‘လိုက်လျောညီထွေ ဒီမို’ဆိုတဲ့ အပင်ကြီးကနေ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့အသီးတွေမသီးပဲ နံစော်ချဉ်စုပ်နေတဲ့ အသီးတွေ သီးလာတော့မှာ။ ကြည့်စမ်းပါဦး။ အပင်ရှင်သန်ဖို့ ဆိုပြီး မစင်တွေလောင်းထားရသတဲ့။
ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီး၊ မတင်မေလေးတစ်ယောက် အရမ်း စိတ်ညစ်နေရပြီလေ။ ဇာတ်လမ်းအစက ဆိုခဲ့ သလိုပေါ့။ ဘာများလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ တော့ အချိန်တန်ပြီမဟုတ်လား။
တစ်နေ့တော့ကိုပေါက်ကျော် အလစ်အငိုက် ခြံထဲကနေ ခဏခိုးထွက်သွားလိုက်တယ်။ တကယ်ဆို အပြီးအပိုင် ထွက်ခဲ့ရင်လဲ အရပ်ကဝိုင်းစောင့်ရှောက်ထားကြမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီခြံဟာ မတင်မေပိုင်တဲ့ ခြံလေ။ ဘာလို့ခြံအပြင်မှာ အကြာကြီးနေရမှာလဲ။ သူမရည်ရွယ်ချက်က အိမ်နားနီးချင်းတွေနဲ့ ရွာ အနောက်ပိုင်းက လူတွေကို သွားပြီး စစ်ကူခေါ်ဖို့လေ။ သူမခြံလေးထဲမှာ ဒီမိုပင်ကြီး စိုက်ချင်ရှာတာကိုး။
တကယ်တန်းကျတော့ အထင်နဲ့ အမြင်က လွဲရရှာတယ်။ သူမခြံထဲမှာ ‘ဒီမို’ ပင်လေး ဝိုင်းဝန်း စိုက်ဖို့က ရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ကို တင်ပြရမယ်ဆိုပဲ။ သူမလဲ တင်ပြဖို့ ကြိုးစားရှာပါတယ်။ သူမတို့ ရွာကလဲ အကြီးသားဆိုတော့ ကိုယ့်အရေးလိုပဲ တခြားအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေက ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။
ပြီးတော့ ဒီအဖွဲ့ကြီးထဲမှာ ကိုပေါက်ကျော်က အရှင်သခင်လို ကိုးကွယ်နေတဲ့ ကိုတရုတ်ကြီး ဆိုတာရယ်၊ ကိုပေါက်ကျော်ကို လက်နက်တွေရောင်းပြီး ငွေရှာနေတဲ့ ကိုရုရှား ဆိုတာကြီးရယ်က ပါနေတော့၊ မတင်မေ ထင်ခဲ့သလောက်တော့ အားကိုးလို့ မရတော့ဘူးပေါ့။ မတင်မေလေးရဲ့ မိတ်ဆွေလေး တစ်ချို့ကတော့ အားပေးရှာပါတယ်။ အခါအခွင့်သင့်ရင်သူတို့ ကူညီပါ့မယ်တဲ့။ ဘယ်တော့ဆိုတာတော့ သူတို့လဲ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်မျိုးစေ့လေးလဲ ပေးလိုက်တဲ့အပြင် အပင်စိုက်ပျိူးနည်းတွေပါ သင်ပေးလိုက် ကြတယ်။
နောက်ဆုံးတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လပြည့်ညရဲ့ ရွာလမ်းလေးမှာ လျှောက်နေလိုက်တာ မမျှော်လင့်ပဲ ပညာရှင်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ တိုးပါလေရော။ ပညာရှင်ကြီးကို အကြောင်းစုံရှင်းပြတော့ သူက တစ်နေရာကို လက်ညှိုးထိုးပြလေရဲ့။ အမယ်။ မဘုတ်ဆုံတို့ သားအမိပါလား။ ဟုတ်ပါရဲ့။ သူတို့ တဲစုလေးနား ရောက်နေတာကိုး။ မဘုတ်ဆုံရဲ့သားလေးက မိုးပေါ်ကလမင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး “ထမင်းဆီဆမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းကြီး” တောင်းနေလေရဲ့ ။
‘ငါ့သမီး၊ လမင်းကြီးဆီကနေ ရွှေလင်ဗန်း’ ရတဲ့ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိဖူးလို့လဲ။ အခုဆို သမီးအဖြစ်က ဒီကလေးလေးထက်တော့ သာပါတယ်။ မျိုးစေ့ချနည်း၊ အပင်စိုက်နည်းတွေလဲ သိခဲ့ရပြီပဲကွယ်။ ဘာလို့ ရွာအုပ်ချုပ်ရေးကို အားကိုးနေမှာလဲ။ ကိုယ့်အားလေးတော့ကိုယ်ကိုးဦး မှပေါ့။ နေရာတိုင်းမှာ သူများကူတာကို ချည်းထိုင်စောင့်နေရင် မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်။’ သူမအသိဥာဏ်လေးများ လင်းလက်သွားသလိုပဲ။ ပညာရှိကြီးက ဆက်ပြောတယ်။
‘အခုသမီးရဲ့ ဒီမိုပင်စိုက်ဖို့ကိစ္စမှာ အတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့ ပေါက်ကျော်ဆိုတာဟာ တစ်ချိန်က သမီးရဲ့ အလုပ်သမား ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ခြံစောင့်တယောက်ပါ။ သူအခုတုတ်ဆွဲ၊ ဓားဆွဲလုပ်နေတာ တကယ်တော့ သမီးကိုသူ ကြောက်နေလို့။ လူနဲ့လူချင်း ရင်မဆိုင်ရဲလို့ လက်နက်အားကိုးနေရရှာတာ။ ဒါကို သမီးက သူ့အလို ကျလိုက်ပြီး၊ သူတုတ်စဆွဲတာနဲ့ ကြောက်ပါပြီလုပ်နေတာကိုး။ ပြောချင်သမျှကိုလဲ ဒူးထောက်ပြီးမှ ပြောနေတာကိုး။ သူဗိုလ်ကျအနိုင်ယူရဲတော့မပေါ့”
‘ဒါဆိုသမီးကလဲ တုတ်ဆွဲပြီး သူ့ကို ဝင်ရိုက်ရမလားအဘ’ ‘အဲဒီလိုလုပ်သင့်ရင်လဲ လုပ်ရမယ်။ မလုပ်ခင် သူ့ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုသာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီခြံဟာသမီး ခြံပဲလေ။ အပင်စိုက်ခွင့်ကို သူ့ဆီတောင်းဆိုရအောင် သူ့ခြံမှ မဟုတ်တာ။ သူ့အလုပ်ကခြံစောင့်။ ခြံစောင့်က ခြံစိုက်ချင်လို့မရဘူး။ သမီးရဲ့ စိတ်အင်အားကို စနစ်တကျ အရင်စုစည်း၊ နောက်တော့သူ့ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး ခြံစောင့်နေရာကို ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်။ တကယ်တန်းကျတော့ သမီးရဲ့ စိတ်အင်အားစုစည်းမှုကို သူအနိုင်မယူနိုင်ပါဘူးကွယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီခြံရဲ့ အရှင်သခင် အစစ်အမှန်က သမီးဖြစ်နေတာကိုး။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှ အောင်မြင်နိုင်တာတွေလဲရှိတယ် သမီးရဲ့တဲ့”
(မှတ်ချက် ။ ။ ဤအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပွားပြီး၊ များမကြာမီကာလ၌ မတင်မေခြံထဲတွင် သူမစိုက်ချင်သော ‘ဒီမိုပင်ကြီး’ ရှင်သန်ကြီးထွားလာသည်ကို လူအများတွေ့ မြင်ကြရလေသည်)
“သစ်ပင်စိုက်ချင်သူများအားလုံး၊ ကိုယ့်ခြံ၊ ကိုယ့်စိုက်ခင်းတွင် အောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ကြပါစေသတည်း”
Posted by Bay of Arakan at 6:59 AM ,0comments
ဆရာတော် အသျှင်ဦးဥတ္တမ (၁၈၇၉ - ၁၉၃၉)
(ALD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဦးစောမြအောင်၏ ဈာပနာအခမ်းအနား
Posted by Bay of Arakan at 5:46 AM ,0comments
Bay of Arakan Blog သည် တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် စာရှုသူ မိတ်ဆွေများ စောင့်ဆိုင်းပြီး ဖတ်ရှုပေးကြပါ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါသည်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ဦးစောမြအောင် အသက် (၉၁) နှစ် ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ခြင်းအတွက် Bay of Arakan မှ ကျန်ရစ်သောမိသားစုနှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ကြေကွဲရပါကြောင့်း
ရခိုင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါက်တာစောမြအောင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သည့်အပေါ် AASYC မှ ပေးပို့သည့် ၀မ်းနည်း...
Condolence for U Saw Mra Aung!
Publish at Scribd or explore others: Asian Politics
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဦးစောမြအောင် ကွယ်လွန် (ဇန်န၀ါရီ - ၅ ရက်) အပြည့်အစုံ
စစ်တွေကျောင်းသား ၅၀၀ ခန့် သွားလာရေးခက်ခဲလို့ လမ်းလျှောက်ကန့်ကွက် (ဇန်န၀ါရီ - ၅ ရက်) အပြည့်အစုံ
မြန်မာလွတ်လပ်ရေး အပေါ် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များ အမြင် (ဇန်န၀ါရီ - ၅ ရက်) အပြည့်အစုံ
ရခိုင်ပြည် အချုပ်အချာအာဏာကျဆုံးနေ့ အခမ်းအနားး မလေးရှားရောက် ရခိုင်အမျိုးသားများကလည်း ကျင်းပ (ဇန်န၀ါရီ - ၄ ရက်) အပြည့်အစုံ
ရခိုင်အချုပ်အချာအာဏာ ကျဆုံးနေ့ အခမ်းအနား ဒိန်းမတ်နိုင်တွင်လည်း ကျင်းပ (ဇန်န၀ါရီ - ၄ ရက်) အပြည့်အစုံ
၂၂၄ နှစ်မြှောက် ရခိုင်ဘုရင့် နိုင်ငံတော် အချုပ်အချာအာဏာကျဆုံးနေ့ အခမ်းအနား နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ (ဇန်န၀ါရီ - ၄ ရက်) အပြည့်အစုံ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးကပ်တွင် ပြုလုပ်သော ရခိုင်အချုပ်အချာ အာဏာကျဆုံးနေ့ လူပေါင်း ၂၀၀ ခန့် တက်ရောက် (ဇန်န၀ါရီ - ၂ ရက် ၂၀၀၉) အပြည့်အစုံသို့
သစ်နှင့်ဝါးတောများ ထက်ဝက်ခန့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခုနှစ်ပိုင်း၌ ဒီရေတော အမြောက်အမြားဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရ (ဇန်န၀ါရီ - ၂ ရက် ၂၀၀၉) အပြည့်အစုံ
Posted by Bay of Arakan at 4:56 AM ,0comments
Posted by Bay of Arakan at 4:52 AM ,0comments
မဟာနွယ် - ၀င်းကိုခိုင်
Posted by Bay of Arakan at 4:30 AM ,0comments
၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီလ သတင်းများ
ဇန်န၀ါရီ - ၂၃ ရက်
- ဂမ်ဘာရီ ပြန်လာမည် အပြည့်အစုံ
- ရွှေပြည်အေးမြို့သစ်တည်ဆောက်ရေး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်း အပြည့်အစုံ
- ဧည့်လာရန်သာ အရေးကြီးဟု ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များပြော အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်မှာ လျှပ်စစ်မီးပြတ်၊ EPC က အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ အပြည့်အစုံ
- လေထန်ကုန်း တပတ်ပိတ် အပြည့်အစုံ
- ဘာလင်-မြန်မာသံရုံး လွတ်လပ်ရေးဧည့်ခံပွဲ၊ နာဇီအမျိုးသားသီချင်းနှင့် မှားဖွင့်လို့ အရှက်ရ အပြည့်အစုံ
- စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုကို စစ်အစိုးရ ဘာကြောင့်ကြောက်ရသလဲ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များ ကံကြမ္မာ-၂ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ထိုင်း-မြန်မာ အောက်လမ်းခရီး ဟွေ့ဟင်ဖွန်ဂိတ်နှင့် (၉၉၉) လူပွဲစားများ (သတင်းဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- တရုတ်နှစ်ကူး မြန်မာပြည်တွင် ပြုလုပ်သည် အပြည့်အစုံ
- တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများကို နှိမ်နင်းတော့မည် အပြည့်အစုံ
- ဦးသန့် သို့မဟုတ် မီးလျှံကြားက ကြာပန်းတပွင့် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာ့တဘက်ခြမ်းမှ ပဲ့တင်သံအင်အား (သူ့အမြင် သူ့အတွေး) အပြည့်အစုံ
- ဝ ပြည်သွေးစည်းရေးကို ပါတီအဖြစ်ပြောင်းရေး စစ်အစိုးရ စည်းရုံးပြန် အပြည့်အစုံ
- လှဒါနီ ပြောချင်သေးတယ် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ကုလအထူးသံ သွေးတိုးစမ်းဦးမည် (သုံးသပ်ချက်) အပြည့်အစုံ
- လူပျင်းနှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ပွင့်အန်ထွက်လာသော စကားလုံးများ (သို့မဟုတ်) ယဉ်ကျေးမှုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်၍မရ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် အဖွဲ့များကို ၀န်ကြီးဌာနများက စာရင်းကောက် အပြည့်အစုံ
- ကုလကိုယ်စားလှယ် ဂမ်ဘာရီ မကြာမီ မြန်မာပြည်လာဦးမည် အပြည့်အစုံ
- ဟီလာရီကလင်တန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန် စတင်ထမ်းဆောင် အပြည့်အစုံ
- ၁၆ လအတွင်း အီရတ်ကဆုတ်ခွာရေး အမေရိကန် စဉ်းစားဆဲ အပြည့်အစုံ
- သေကံမရောက် ရေမျော မြန်မာနှစ်ဦး (ဗွီဒီယိုသတင်း) အပြည့်အစုံ
- အရေးပါတဲ့ ရာထူးတွေ အိုဘားမား ခန့်အပ်ပြီ အပြည့်အစုံ
- စစ်တွေသံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်သံဃာ ထောင်တွင်း၌ ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေ အပြည့်အစုံ
- ပြည်ပရောက် မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အိုင်ယာလန်၌ စည်းဝေး အပြည့်အစုံ
- အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုရေး စီအာပီပီ ဆွေးနွေး အပြည့်အစုံ
- ထောင်ကျနေသည့် လူငယ်ရှေ့နေ ဦးညီညီထွေး၏ အယူခံကို ပယ်ချ အပြည့်အစုံ
- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကို ရှေ့နေမပါဘဲ အမှုစတင်စစ်ဆေး အပြည့်အစုံ
- ပြန်ပေးဆွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၌ မြန်မာနှစ်ဦးကို တရုတ်ရဲက ဖမ်းထားသည်ဟုဆို အပြည့်အစုံ
- ပူကျင့်ရှင်းထန်၏ သားအမှုကို ပြင်ဆင်လိုက်၍ ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ်လျော့ အပြည့်အစုံ
- သီးနှံပျက်၍ တောင်သူအခက်ကြုံ၊ နာဂစ်ဒေသ၌ ကုလသမဂ္ဂက ကူညီနေဟုဆို အပြည့်အစုံ
- မိတ္ထီလာတွင် အနှိပ်ခန်းဗန်းပြသည့် ဇိမ်ခန်းများ များပြားလာ အပြည့်အစုံ
- ဒလအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ခေါင်းဆောင် အမှုဆင်ထောင်ချခံရ အပြည့်အစုံ
- ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး (အမှတ်တရများ) အပြည့်အစုံ
- အမျိုးသားစာဆို ကဗျာဆရာတင်မိုး (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာကြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့နေ့ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ညောင်ရွှေဟော်နန်းအား နအဖစစ်အစိုးရက ဗုဒ္ဓပြတိုက်အဖြစ် ပြောင်းလဲ အပြည့်အစုံ
- နယ်လှည့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဇာတ်အဖွဲ့ တညတာဖြေဖျော်မူ ဆုငွေသန်းချီရ အပြည့်အစုံ
- UN envoy to visit Myanmar အပြည့်အစုံ
- DAAD tells ASEAN members Thai gov't illegitimate to hold summit အပြည့်အစုံ
- Dragon dance competition for Chinese New Year begins in Myanmar အပြည့်အစုံ
- UDD asks Asean members to skip summit အပြည့်အစုံ
- Jailed Myanmar monk goes on hunger strike အပြည့်အစုံ
- All known Chinese kidnap victims in Myanmar released အပြည့်အစုံ
- Myanmar junta congratulates Obama: state media အပြည့်အစုံ
- Myanmar media call for extensive extraction of bio-gas for electricity supply အပြည့်အစုံ
- Myanmar, Thailand cooperate in weather forecasting အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီလ (၂၂) ရက်
- ဦးသန့် ရာပြည့် ရန်ကုန်မှာကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ဦးသန့် ရာပြည့်မွေးနေ့ အင်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ စာဖတ်ဝိုင်း ကျင်းပခဲ့ အပြည့်အစုံ
- ဦးသန့် ရာပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနား ဂုဏ်ပြုကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ဦးသန့် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် မလေးရှားရောက် အတိုက်အခံများ ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့သားကောင်း ဦးသန့် (မျက်မှောက်ရေးရာ) အပြည့်အစုံ
- ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် အပြည့်အစုံ
- ဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့ ဦးသန့် အပြည့်အစုံ
- သန့်ရာပြည့် (အပိုင်း - ၁) အပြည့်အစုံ
- ဂွာတာနာမို အကျဉ်းစခန်း တနှစ်အတွင်းပိတ်ဖို့ အိုဘားမား အမိန့်ပေး အပြည့်အစုံ
- အဆိပ်သင့်နို့မှုန့်ကိစ္စ တာဝန်ရှိသူတွေကို သေဒဏ်ပေး အပြည့်အစုံ
- သမ္မတအိုဘားမားမိန့်ခွန်း တရုတ် ဆင်ဆာလုပ် ထုတ်လွှင့် အပြည့်အစုံ
- ဘာရက်အိုဘားမားနဲ့ တရုတ်အစိုးရ (မျက်မှောက်ရေးရာ) အပြည့်အစုံ
- တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်မှု နှိမ်နင်းမည်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံခြားလုပ်သားသစ်ခေါ်ယူမှု မလေးရှားအစိုးရ တရားဝင်ပိတ်ပင် အပြည့်အစုံ
- ကျပ် ၅၀၀ တန်အတု သတိပြုဖို့ ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ကြား အပြည့်အစုံ
- အရှင်ဂမ္ဘီရကို ခန္တီးထောင်ပြောင်းလိုက်ပြီး မိသားစုဝင်များ အလွန်စိုးရိမ်နေ အပြည့်အစုံ
- မန္တလေးထောင်မှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ရသည့် မကေသီအောင်၏ ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရ အပြည့်အစုံ
- မုန်တိုင်းသင့် လယ်သမားများအတွက် ယူအန်ဒီပီ စိုက်ပျိုးစရိတ် စီစဉ်ကူညီနေ အပြည့်အစုံ
- မန္တလေးတိုင်းအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးမှူး ဦးခင်ထွန်း နေအိမ်မှာ ဆေးကုသခွင့်ရ အပြည့်အစုံ
- မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်လ်ဒီအတွင်းရေးမှူး ထောင်က ပြန်လွတ်လာ အပြည့်အစုံ
- ပြည်မြို့တွင် ကြက်များ လည်လိမ်ရောဂါ ဖြစ်ပွား အပြည့်အစုံ
- အရှင်ဂမ္ဘီရကို ခန္တီးထောင်ဆီ ရွှေ့လိုက်ပြီဟု ထောင်အရာရှိပြော အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မွန်အမျိုးသားအခွင့်အရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးမည်မဟုတ် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) အပြည့်အစုံ
- Ban marks centenary of birth of former Secretary-General U Thant အပြည့်အစုံ
- 17 abducted teens returns from Myanmar အပြည့်အစုံ
- Report Says Deaths, Economic Losses Jump in 2008 အပြည့်အစုံ
- No flower children အပြည့်အစုံ
- The Burma Play: A Comedy of Terror အပြည့်အစုံ
- Myanmar’s Deputy FM meets Qureshi အပြည့်အစုံ
- Myanmar cyclone and China quake drive up 2008 global disaster toll အပြည့်အစုံ
- 2008 deadly year for natural disasters အပြည့်အစုံ
- UN: Myanmar, China pushed high 2008 disaster toll အပြည့်အစုံ
- Myanmar builds more fertilizer plant to meet domestic demand အပြည့်အစုံ
- ဦးသန့် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်မည် အပြည့်အစုံ
- ဒုတိယံမ္ပိ ကျမ်းကျိန်ရသည့် သမ္မတကြီးအိုဘားမားအဖြစ် အပြည့်အစုံ
- သမ္မတသစ် အိုဘားမားရဲ့ ပထမနေ့ အပြည့်အစုံ
- သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ပထမဆုံး ညွှန်ကြားချက် အပြည့်အစုံ
- ဟီလာရီကလင်တန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ် အပြည့်အစုံ
- ဟီလာရီ၏ Smart Power နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ အပြည့်အစုံ
- ပဲဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများဖွဲ့ခိုင်း အပြည့်အစုံ
- ပါရမီတက္ကစီ ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေသာ ရောင်းမည် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာငွေ ရုတ်တရက်မာ၊ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတချို့ ရပ်ဆိုင်း အပြည့်အစုံ
- ကချင်ဒေသမှ တရုတ်တချို့ ပြန်လွတ်ပြီ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတဦး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်ဒေသမှ ကလေးငယ်များကို ဈေးပေါပေါနှင့် ခိုင်းစေနေ အပြည့်အစုံ
- ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ လူနာများ ဖယ်ရှားခံရ အပြည့်အစုံ
- မလေးရှားက နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများကို တံခါးပိတ်ပြီ အပြည့်အစုံ
- ချင်းပြည်နယ်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကြောင့် မယက ဥက္ကဋ္ဌ ပြုတ် အပြည့်အစုံ
- ကျောင်းကားမှောက်၍ သန်လျင် ဂျီတီစီကျောင်းသား ၃ ဦး စံပြဆေးရုံရောက် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာရေးလုပ်သားနှစ်ဦးကို သြစတြေးလျက ခိုလှုံခွင့်ပေးဖွယ်ရှိ အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်သမ္မတသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားအချို့၏ အမြင် အပြည့်အစုံ
- မလေးရှားမှ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ဒုက္ခသည်များမဟာမင်းကြီးရုံးကို ဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- ရွှေပေါ်ကျွန်း သာသနာပြုစခန်းတွင် လူသေမှုနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဖြစ် အပြည့်အစုံ
- မော်လမြိုင်ယာယီဈေး ဆိုင်ခန်းတခန်း ငါးသောင်းကျပ် စည်ပင်သာယာကို ပေးရ အပြည့်အစုံ
- ဆယ်ကျော်သက် ကျောင်းသူနှစ်ဦးကို ကျောင်းအုပ်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကား အပြည့်အစုံ
- ရေနံကုမ္ပဏီမီးလောင်မှု အဖမ်းခံရသူ ၇၀ ကျော်ပြီဟု ဒေသခံတွေ ပြော အပြည့်အစုံ
- အိုးဘိုထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ၊ နှလုံးရောဂါစွဲကပ် အပြည့်အစုံ
- ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးပွဲ နယူးယောက်မှာ ကျင်းပမယ် အပြည့်အစုံ
- ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများ ဆွမ်းကပ်ကြမည် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာစာပေသမိုင်းမှာ တင်မိုးရဲ့ ကဏ္ဍကို သုံးသပ်ကြရင် (တင်မိုးကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့်) အပြည့်အစုံ
- မာမာအေး - ၂ နှစ်ပြည့် ကဗျာမိုး အမှတ်တရ အပြည့်အစုံ
- ဖျာပုံနီလုံဦး - တိုက်ပွဲပျော် ကဗျာဆရာ အပြည့်အစုံ
- မီးရထားနဲ့ ခရီးသွားခြင်း (အမှတ်တရများ) အပြည့်အစုံ
- ဆရာကြီးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အပြည့်အစုံ
- ကဗျာချိုး ဆေးလိပ်ချိုး ဆရာမိုး (ကဗျာ) အပြည့်အစုံ
- မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပတ္တိ အပိုင်း(၆) အပြည့်အစုံ
- လားဟူပြည်သူစစ်များကို အင်အားတိုးချဲ့ရန် ညွှန်ကြား အပြည့်အစုံ
- တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလ နယ်စပ်ဒေသတွင် တရုတ်ငွေဈေးကျဆင်း အပြည့်အစုံ
- မွန်ပြည်နယ်တွင် ဆီဈေးနှုန်ကျဆင်းသော်လည်း ကားခ မကျသေး အပြည့်အစုံ
- ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန် ခရီးစဉ်အား စီစဉ်ရန် တိုင်းမှူးသောင်းအေး မောင်တောသို့ရောက် အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်မြောက်ပိုင်းအခြေစိုက် နအဖစစ်တပ်မှ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသူ စစ်သား ၅ ဦးရှိ အပြည့်အစုံ
- ယူအန်အေဂျင်စီ၏ ခွဲခြားဆက်ခံမှုများအပေါ် မြန်မာဒုက္ခသည်များ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- ဘာကြောင့် အာဏာမလွှဲပေးရသလဲ (အမြင်သဘောထား) အပြည့်အစုံ
- Centennial birthday of Myanmar's former UNchief to be marked အပြည့်အစုံ
- China police detain two over Myanmar kidnap scandal: state media အပြည့်အစုံ
- 17 kidnapped Chinese teens return home, two still held in Myanmar အပြည့်အစုံ
- The war on Myanmar's border - Unequal struggle အပြည့်အစုံ
- Burmaaworkers' dystopia အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီလ - ၂၁ ရက်
- ပါတီစွဲ ရှေ့တန်းမတင်ဖို့ အိုဘားမားတိုက်တွန်း အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားတွေ ဌာနေပြန် သက်တမ်း တိုးရတော့မည် အပြည့်အစုံ
- ရေမျောမြန်မာနှစ်ဦးကို ငှက်ကြီးနှစ်ကောင် အစာအန်ပေးခဲ့ အပြည့်အစုံ
- မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများက အလုပ်ရှင်ကို တရားစွဲဖို့ပြင် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်များကို အိုင်ယာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကြိုဆို အပြည့်အစုံ
- စစ်အစိုးရတပ်နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်းတပ်များ တိုက်ပွဲ သုံးကြိမ်ဖြစ်ပွား အပြည့်အစုံ
- ကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှု တားမြစ်သူကို ထောင်ဝင်စာပစ္စည်းပေးခွင့်မရသေး အပြည့်အစုံ
- ဂွာတာနာမိုကိစ္စအပေါ် သမ္မတသစ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာသဘောင်္သားနှစ်ဦး ပင်လယ်ထဲမှာ တလနီးပါးမျော အပြည့်အစုံ
- ဆရာသိန်းဖေမြင့်၏ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- တိုက်ပွဲပျော် ကဗျာဆရာ (ကဗျာ) အပြည့်အစုံ
- တရုတ်များ ကချင်ဒေသတွင် ပြန်ပေးဆွဲခံနေရ အပြည့်အစုံ
- အရှင်ဂမ္ဘီရကို ထောင်ပြောင်းပြီ အပြည့်အစုံ
- ဝါရှင်တန်သွား တောလား (ထွေရာလေးပါး) အပြည့်အစုံ
- ရင်ချင်းဆက်အမွှာ မွေးဖွား အပြည့်အစုံ
- အန်အယ်ဒီ မြို့နယ်စည်း ထောင်ဝင်စာ အပိတ်ခံရ အပြည့်အစုံ
- မစ္စတာအိုဘားမား ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ (ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်များ) အပြည့်အစုံ
- အတိုက်အခံပါတီဝင်ကို ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှုဖြင့် ထောင် ၂ နှစ် အပြည့်အစုံ
- ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချခံရသူများအကြောင်း အာရှလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များအား တိုင်ကြား အပြည့်အစုံ
- မောင်တောတွင် လုံခြုံရေး အထူးတင်းကျပ် အပြည့်အစုံ
- အဓမ္မကို ဓမ္မနှင့်တိုက်ထုတ်ရန် သံဃာ့သပိတ်ကော်မီတီအဖွဲ့က စစ်တွေတွင် စာများဖြန့် အပြည့်အစုံ
- သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝင်းစိန်တောရဆရာတော်အား ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း တည်ရှိရာနေရာ လာ ရောက်မေး အပြည့်အစုံ
- A New Government for Burma အပြည့်အစုံ
- PTTEP writes off Janaka-2 on Block M3 off Myanmar အပြည့်အစုံ
- Burma, Myanmar: Sri Lanka-based Burmese Media Website Attacked အပြည့်အစုံ
- ဘရက်ခ်အိုဘားမား ၄၄ ဦးမြောက် အမေရိကန်သမ္မတသစ် ဖြစ်လာ အပြည့်အစုံ
- သမ္မတသစ် အိုဘားမား ငြိမ်းချမ်းရေးခေတ်သစ် လမ်းခင်းမည် အပြည့်အစုံ
- သမ္မတသစ် အိုဘားမားကို ကမ္ဘာက ၀ိုင်းကြိုဆို အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းဘုရင်ကို စော်ကားလို့ ထောင်ချ အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန် UNODC ရုံးကို ကုလမှ စာရင်းစစ်၊ မူးယစ်နှင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ စီမံကိန်းများ ကျေနပ်မှုမရှိ အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချုပ်ပိုင်ခွင့် မေလကုန် ၆ နှစ်ပြည့်ပြီဟု ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်း ပြော အပြည့်အစုံ
- စစ်တွေမြို့ လုံခြုံရေးထူထပ်စွာချထား အပြည့်အစုံ
- ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်တင့်ဆွေကို ပြန်ခေါ်ပြီ အပြည့်အစုံ
- ၀ါဒမှိုင်းတိုက် မြှောက်ပင့်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ပစ်မှတ် (၁) ဦးတယောက်မှ တဖွဲ့လုံးသို့ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ် အပြည့်အစုံ
- တရုတ်များ ကချင်ဒေသတွင် ပြန်ပေးဆွဲခံနေရ အပြည့်အစုံ
- ကျောင်းကြိုပို့ ယာဉ်တစီး တိမ်းမှောက် အပြည့်အစုံ
- ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်ထွင်စေချင်သူ (လူထုစိန်ဝင်းနှင့် အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာအလုပ်သမား ၁၇ ဦးကို လူမိုက်များက ခြိမ်းခြောက် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် တရုတ်၏ သြဇာမှေးမှိန်သွားပြီလော အပြည့်အစုံ
- ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချခံရသူများအကြောင်း အာရှလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များအား တိုင်ကြား အပြည့်အစုံ
- အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသည့် အရှင်ဂမ္ဘီရကို ခန္တီးထောင်သို့ ပို့လိုက်ပြီ အပြည့်အစုံ
- သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု၌ ပါဝင်ခဲ့သည့် အရှင်ခေမာစာရကို ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ် ချမှတ် အပြည့်အစုံ
- နအဖအာဏာပိုင်များက ခရစ်ယာန်ဝတ်ပြုအသင်းများကို ပိတ်ပစ်ခိုင်းနေ အပြည့်အစုံ
- မျိုးဆက်သစ်နှစ်ဦးကို အင်းစိန်ထောင်၌ တိုက်ပိတ်ထား အပြည့်အစုံ
- ကေအိုင်အို ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်၊ မငြိမ်းချမ်းသရွေ့ လက်နက်မစွန့် အပြည့်အစုံ
- ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်ဆင်လျှင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ခဲယဉ်းမည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပြော အပြည့်အစုံ
- ဦးတင်မောင်ဝင်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၈ နှစ်ပြည့် အပြည့်အစုံ
- Bird vomit saved men's lives အပြည့်အစုံ
- Myanmar Hopes For US Policy Change From Obama - Official အပြည့်အစုံ
- Myanmar strives for development of cross-border fiber links with neighbors အပြည့်အစုံ
- Myanmar Refugees Protest Alleged UN Discrimination အပြည့်အစုံ
- Canadian forest industry supports EU crackdown on illegal logging အပြည့်အစုံ
- The Government of the Republic of the Philippines contributes to ASEAN's continued humanitarian effort in Myanmar အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၂၀ ရက်
- အိုဘားမားရဲ့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲနဲ့ ၀ါရှင်တန်မြင်ကွင်း အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမားရဲ့ ဘ၀ကောက်ကြောင်း တစေ့တစောင်း အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမား သမ္မတအဖြစ် ပထမဆုံးပြောတဲ့ မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
- သမ္မတသစ်ဆက်စပ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုကင်ညာ မျှော်လင့်ချက် အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမားအတွက် နိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက် အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ မှာ အိုဘားမား ဘာတွေကို ဦးစားပေးမလဲ အပြည့်အစုံ
- ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားပုံများ အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမား ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုနေစဉ် အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမားအစိုးရမှာ ပါမယ့်ဝန်ကြီးများ အပြည့်အစုံ
- အိမ်ဖြူတော်အရောက် အိုဘားမား ခရီးလမ်း အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမား (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ အပြောအဟောကောင်းသူ အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမားအပေါ် မျှော်လင့်ချက်တွေ အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမားအပေါ် နိုင်ငံတကာမျှော်လင့်ချက် အပြည့်အစုံ
- ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအတွက် ၀ါရှင်တန်လုံခြုံရေး အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမား ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ လူသန်းနဲ့ချီ လာဖို့ရှိ အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမား၏ရှေ့ရေး စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်ပြီ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့အရေး အိုဘားမား ဆက်ကူညီရန် မျှော်လင့် အပြည့်အစုံ
- သမ္မတသစ် အိုဘားမားအတွက် စကားလက်ဆောင် အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်နဲ့ စစ်ရေးဆက်ဆံမှု ပိုအားကောင်းလာဖို့ တရုတ်နှိုးဆော် အပြည့်အစုံ
- အရှေ့တီမောသမ္မတရဲ့ ပြောဆိုမှုအပေါ် ဆွေးနွေးချက် (ဗွီအိုအေ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း အစီအစဉ်) အပြည့်အစုံ
- အေးနေသော စာအုပ်ဈေးကွက်၌ “လှေကားထစ်များရဲ့ ရာဇ၀င်” စာအုပ် ရောင်းအကောင်းဆုံး အပြည့်အစုံ
- ဒလအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တဦး အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- တေးသံရှင်ဂျောက်ဂျက် ခေါ်ယူသတိပေးခံရ အပြည့်အစုံ
- ကိုဝင်းမော်(ရွှေသံစဉ်)ကို ထောင်ပြောင်း အပြည့်အစုံ
- အရှင်ဂမ္ဘီရ မန္တလေးအိုးဘိုထောင်၌ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေ အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်များတွင် ပြည်ခိုင်းဖြိုး စည်းရုံးရေးစတင် အပြည့်အစုံ
- ၈၈ ကျောင်းသူ မမီးမီးကို ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရ အပြည့်အစုံ
- နေအိမ်ခန်းအတွင်းက ဘာသာရေးဆုတောင်းပွဲများ တားမြစ်ခဲ့ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့အလင်း(ဦး)သန်းညွန့် ကွယ်လွန်ခြင်း တလပြည့် အပြည့်အစုံ
- ပင်လယ်အတွင်းမှ လွတ်မြောက်လာသူနှစ်ဦးနှင့် စကားပြောခြင်း အပြည့်အစုံ
- ရေနံကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်သည့်အပြင် လူမိုက်မွေးပြီး ထင်တိုင်းကျဲနေ အပြည့်အစုံ
- ရေခဲပုံးထဲမှ မြန်မာ ၂ ဦး ပင်လယ်တွင် ၁ လကြာ မျောနေခဲ့ အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်ရရေး ၀န်ကြီးချုပ်ထံ အယူခံ တင်မည် အပြည့်အစုံ
- ထောင် ၆၅ နှစ် ကျခံရသူ မနီလာသိန်း ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း အပြည့်အစုံ
- တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးများအရေး ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်မည် အပြည့်အစုံ
- ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့် တောင်ပေါ်သား ခေါင်းဆောင်သုံးဦး တာကာငွေ ၃ သိန်းပေးပြီးနောက် ပြန်လည်လွတ် မြောက်လာ အပြည့်အစုံ
- ဖမ်းမိထားသော ငွေစက္ကူအတု ပြုလုပ်သူများ စီအိုင်ဒီမှ စစ်ဆေးနေဆဲ အပြည့်အစုံ
- Court revokes deportation order for Myanmar woman အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ လူဖြူအစွန်းရောက်အန္တရာယ်ရှိဟု FBI သုံးသပ် အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ အကြိုအခမ်းအနား (ဗွီဒီယိုသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကို သမ္မတဘုရှ် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အပြည့်အစုံ
- လင်ကွန်း၊ မာတင်လူသာကင်းနဲ့ အိုဘားမား မှသည် … (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ ၂ ဦး ပင်လယ်တွင် ၁ လနီးပါး မျောပါခဲ့ အပြည့်အစုံ
- ပင်လယ်ပြင်မျော မြန်မာနှစ်ဦး သြစတြေးလျ ကမ်းခြေစောင့်တပ် ကယ်တင် အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် “အမှန်တရားစိတ်ဓာတ် နှိုးဆော်သူဆု” ရ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်ဆင်းတွေ အရပ်ဘက်မှာ ညွှန်ချုပ်အဆင့်သာပေးမည် အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာဒုက္ခသည် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ကျဆင်း အပြည့်အစုံ
- စည်းကမ်းပြည့်ဝသော သတင်းများနဲ့ Hip hop ငိုငြီးသံများ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဦးသန့်တို့ခေတ် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဖမ်းဆီးခံ ရေနံမြေလုပ်သားများ မိသားစုနှင့် တွေ့ခွင့်မရ အပြည့်အစုံ
- ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ရှိလည်း ချောပေးခံရ အပြည့်အစုံ
- ဆပ်ရိုးကျချောင်း ကမ်းနားပတ် လမ်းတံတား ကျိုးပျက်မှုကြောင့် ပြည်သူများ သွားရေးလာရေး အခက်ကြုံ အပြည့်အစုံ
- ကချင်ပြည် တရားမ၀င် သစ်လုပ်ငန်းများ ယာယီရပ် အပြည့်အစုံ
- Myanmar fishermen survive month at sea in ice box အပြည့်အစုံ
- Myanmar men survive 25 days at sea in icebox အပြည့်အစုံ
- Myanmar imports more locomotives to help facilitate rail transportation အပြည့်အစုံ
- Brunei's artists invited to Asean event in Myanmar အပြည့်အစုံ
- More than 50 Chinese kidnapped in Myanmar အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၉ ရက်
- အမေရိကန်သမ္မတသစ် အိုဘားမား ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ ယနေ့ကျင်းပမည် အပြည့်အစုံ
- ၂၁ ရာစုရဲ့ သမိုင်းသစ် - ကင်မရာတွေအားလုံး ၀ါရှင်တန်ကို ချိန်ထားမယ့်နေ့ (သတင်းဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မာတင်လူသာကင်း အမှတ်တရနေ့ မစ္စတာအိုဘားမား ဆင်နွှဲ အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးလ်တပ်များ ဂါဇာမှ စတင်ဆုတ်ခွာ အပြည့်အစုံ
- သမ္မတကတော်ဖြစ်လာတော့မယ့် မီရှဲအိုဘားမားရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုလဲ အပြည့်အစုံ
- ကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုအပေါ် တားမြစ်ခဲ့သူကို ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့ ထောင်ချ အပြည့်အစုံ
- မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမ ၁၆ ဦး မတရားဖိနှိပ်ခံနေရ အပြည့်အစုံ
- တစညပါတီ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်း စည်းရုံးရေးစတင် အပြည့်အစုံ
- ဒလ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တဦး ထပ်မံအဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအကြောင်း ဆွေးနွေးချက် အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာမှာ အိုးအိမ်မဲ့ ၅၀,၀၀၀ အထိရှိလို့ ကုလပြော အပြည့်အစုံ
- ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ပဲခူးက ရှေ့နေဦးစန်းမောင် ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရ အပြည့်အစုံ
- စစ်ပြိုင်အစိုးရထပ်ဖွဲ့ခြင်းကြောင့် ပိုအားကောင်းလာမလား၊ ပိုရှုပ်ထွေးလာမလား အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးစောမရအောင်အမှတ်တရ အခမ်းအနားကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး အပြည့်အစုံ
- မြန်မာအန်ဂျီအို ၈ ခုကို သရီးဒီဖန်းက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးအပ် အပြည့်အစုံ
- ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာစာရိုက်ကြစို့ (လောကဓာတ်ခန်း) အပြည့်အစုံ
- သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၅) အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ဂရုရေ … အမေ့ရဲ့ဘီဒိုလေးထဲမှာ မင်းတို့မောင်နှမတွေရှိတယ် (အမှတ်တရများ) အပြည့်အစုံ
- ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၀) - ‘ဓနရှင်’နဲ့ ‘အာဏာရှင်’ အပြည့်အစုံ
- သီးလေးသီးအငြိမ့်သဘင်ရဲ့ တက္ကဆက်ဖျော်ဖြေပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး အပြည့်အစုံ
- မြန်မာပြည်မှာ ညစ်ညမ်းသီချင်းခွေများ သိန်းနဲ့ချီ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိ အပြည့်အစုံ
- ညွန့်ပေါင်းအစိုးရက မြန်မာ့အရေး နည်းဗျူဟာဆွေးနွေးပွဲတခု အိုင်ယာလန်မှာ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေ အပြည့်အစုံ
- ရွှေဝါရောင်မျိုးဆက်များ ပညာရေးအစီအစဉ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား Cox's Bazar တွင် ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာအလုပ်သမားတဦး ကားတိုက်ခံရ၍ သေဆုံး၊ တရားခံ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲ အပြည့်အစုံ
- SSA(တောင်ပိုင်း)နှင့် နအဖတပ်များ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်အ၀င်အထွက် အစစ်အဆေးတွေ ထူထပ် အပြည့်အစုံ
- တောထဲပုန်းရှောင်နေသည့် အလုပ်သမားများ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြ အပြည့်အစုံ
- ကရင်တိုက်ပွဲများအတွင်း ကချင်ပြည်အခြေစိုက် စစ်သားများ အကျအဆုံးများ အပြည့်အစုံ
- Aung San Suu Kyi receives Trumpet of Conscience award အပြည့်အစုံ
- Myanmar: Karen refugees fear more attacks အပြည့်အစုံ
- Freezing Temperatures Hit Remote Areas of Burma အပြည့်အစုံ
- Human Rights in Burma Deteriorating အပြည့်အစုံ
- Myanmar astrologer predicts Obama re-election အပြည့်အစုံ
- ASEAN humanitarian task force meet on post-Nargis relief and recovery efforts in Myanmar အပြည့်အစုံ
- No Trafficking Of Myanmar Nationals - Syed Hamid အပြည့်အစုံ
- Myanmar bans poultry breeding in Yangon populated areas အပြည့်အစုံ
- Myanmar urgently needs foreign coach for national soccer team အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်ဒဏ်နာလန်ထူရေး ၃-၄ နှစ်ကြာနိုင်ဟု ကုလမှန်း အပြည့်အစုံ
- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များ ကံကြမ္မာ (၁) (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မာတင်လူသာကင်းဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွတ်ခူး အပြည့်အစုံ
- ရွှေဝါရောင်ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေ အပြည့်အစုံ
- လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- စီးပွားကျ မြန်မာအလုပ်သမားတို့ ပြည်တော်မပြန်နိုင် အပြည့်အစုံ
- ဆိုင်ကယ်ထိခိုက်မှုကြောင့် နေပြည်တော်တွင် တနေ့ လူ ၈ ဦးနှုန်းသေ အပြည့်အစုံ
- ဂျောက်ဂျက် ၀န်ခံကတိထိုးရ၊ ဆင်ဆာမဲ့ခွေနှင့် မပတ်သက်ဟု ပြော အပြည့်အစုံ
- အစိုးရဗန်တို အခမဲ့ပွဲ ကြည့်သူနည်း အပြည့်အစုံ
- မီးလောင်မော်လမြိုင်ဈေး ယာယီဆိုင်ခန်းတခု ကျပ် ၅၀,၀၀၀ အပြည့်အစုံ
- မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သွားမှတ်တမ်း (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- အရေးတကြီး ဖြည့်ဆည်းရမယ့် ကွက်လပ် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အလွန်ကာလသို့ (အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- ဂွဏ်းခေါ် - အင်ဒီဖဲန်းဒဲန့်စာစောင်လက်ဝယ်ရှိသူ မူဆယ်ဒေသခံတဦး အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- ဓမ္မဟေဝန်နှင့် ပရဟိတ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- သာစိန်ဖြူ ရှစ်ဆက်မြောက် ဖလံထောင် ဗိုလ်မင်း အဖြစ်ဆက်ခံ အပြည့်အစုံ
- ဒေါက်တာစောမြအောင် ၀မ်းနည်းအောက်မေ့အခမ်းအနား နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၈ ရက်
- အစ္စရေးဆုတ်ခွာချိန်အတွက် ပါလက်စတိုင်း အပစ်ရပ်စဲ အပြည့်အစုံ
- တရုတ်ကလေးငယ်တဦး ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရ အပြည့်အစုံ
- လချီထောင်ဝင်စာ ပိတ်ပင်မှု ဥပဒေနှင့်မညီ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ဝေဖန် အပြည့်အစုံ
- ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအပေါ် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေ တိုးပွားလာ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့အရေး မြန်မာတွေသာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ တရုတ်အစိုးရမူဝါဒကို တရုတ်ပညာရှင် ဟော ပြော အပြည့်အစုံ
- ရွာသားတွေကို အဓမ္မလုပ်အားပေး ခေါ်ယူနေ အပြည့်အစုံ
- ညစ်ညမ်းဟစ်ဟော့ပ်သီချင်းများ ပျံ့နှံ့နေ အပြည့်အစုံ
- ဈေးကြီးသည့် မျိုးစပါးအတင်းရောင်း၊ လောင်းကစားကလည်း လယ်သမားထုကို ဖိစီး အပြည့်အစုံ
- Hundreds feared dead at sea: India အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးတို့ အပစ်အခတ်ရပ်၊ ဟားမတ်စ်တို့ မကျေနပ်သေး အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမားအမြန်ရထား ၀ါရှင်တန်ကိုရောက် အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန် သမ္မတကတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ (ဗွီဒီယိုသတင်း) အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးကြေညာချက် အပြည့်အစုံ
- နေပြည်တော်အနီး လှိုဏ်ခေါင်းတူးရာ၌ ဒဏ်မခံနိုင်သူများ ထွက်ပြေး အပြည့်အစုံ
- မြန်မာဆန်ကို ထိုင်းက ပိတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် တရုတ်ဘက်သို့ ဆက်လက်တင်ပို့နေ အပြည့်အစုံ
- အမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အပိုင်း ၅ (မှတ်စုမှတ်တမ်း) အပြည့်အစုံ
- ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (အပိုင်း - ၁) (အာရ်အက်ဖ်အေ အသံလွှင့်ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူ ဖမ်းဆီးခံရ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံတကာ ရခိုင်အမျိုးသားများ၏ အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်နေသော ဖလောင်းချိတ်မြို့ရှိ စေတီတော် ပြီးစီးတော့မည် အပြည့်အစုံ
- Group helps political prisoners in Myanmar အပြည့်အစုံ
- Rights groups condemn Thai refugee abuses အပြည့်အစုံ
- Thai PM to meet rights groups on violation reports အပြည့်အစုံ
- Myanmar provides 10,000 fishing boats for fishery recovery work အပြည့်အစုံ
- Japanese film festival opens in Myanmar အပြည့်အစုံ
- Myanmar fruit export through border trade increases in 2008 အပြည့်အစုံ
- Casting Light on Plight of Burmese Dissidents အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၇ ရက်
- လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူ အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ဦးဂမ္ဘီရ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- အရှင်ဂမ္ဘီရ မန္ထလေးထောင်မှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေ အပြည့်အစုံ
- အရှင်ဂမ္ဘီရ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွားနေ အပြည့်အစုံ
- နယ်ဝေးထောင်တွေ ခက်ခက်ခဲခဲသွားပြီးမှ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်မရ အပြည့်အစုံ
- အာဆီယံက နာဂစ်မုန်တိုင်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေး စည်းဝေး အပြည့်အစုံ
- မြစ်ကြီးနားနဲ့ တနိုင်းလမ်း ယာဉ်တိုက်မှု အကြောင်းပြ အဓမ္မငွေတောင်း အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ကုလတောင်းဆို အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ခွင့်ရဖို့ ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်း ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ အပြည့်အစုံ
- အဲဒီတုန်းက.. ဦးနု ကြားဖြတ်အစိုးရ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၃) အပြည့်အစုံ
- သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၄) အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်ပြည်အတွက် ၂၀၀၉ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- Maldives, Bhutan reach semis of ACC Challenge အပြည့်အစုံ
- Bangladesh wants to demarcate sea border အပြည့်အစုံ
- လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်များအပေါ် ရက်စက်မှု ထိုင်း ငြင်းဆို အပြည့်အစုံ
- တဖက်သတ် အပစ်ရပ်ဖို့ အစ္စရေး မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည် အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းအစိုးရရဲ့ မြန်မာပြည်သဘောထား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု ထောက်ခံ အပြည့်အစုံ
- အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူဖို့ အစ္စရေးနီးစပ် အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေကို မေ့ကုန်ကြပြီလား (ဘီဘီစီ ဆွေးနွေးခန်း) အပြည့်အစုံ
- စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးကို အမေရိကန် အရေးယူ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ - မီးလောင်မှုကြောင့် အဆုံးအရှုံးအများဆုံးနှစ် စံချိန်တင် အပြည့်အစုံ
- တောင်ပေါ်နှင့် နယ်စပ်ဒေသ ပြင်းထန်သည့် အအေးဒဏ်ခံရ အပြည့်အစုံ
- ASEAN eyes $700 mil. to aid cyclone victims in Myanmar until 2011+ အပြည့်အစုံ
- Myanmar to present film awards for 2007 early next month အပြည့်အစုံ
- India rescues Burmese refugees အပြည့်အစုံ
- Family Planning For Refugees In Thailand အပြည့်အစ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၆ ရက်
- သူ့လုပ်ရပ်တွေထဲမှာ သမ္မတဘုရှ် ပြန်ပြောင်းလုပ်ချင်တာတွေရှိ အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်ခံရသူ လုပ်ငန်းရှင်များ ပြန်လည်ချေပ အပြည့်အစုံ
- သစ်ခိုးထုတ်မှု တားဆီးသူ ချီဗွေဒေသခံများ အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရှေ့နေတွေ့ခွင့်ရကြောင်း သတင်းထွက် အပြည့်အစုံ
- ရွှေဝါရောင်သံဃာ၏ မယ်တော် ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရ အပြည့်အစုံ
- တရုတ်လုပ်ဆိုင်ကယ်များ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က သယ်သူရောင်းချနေ အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းစီမံချက်ကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ တောထဲမှာ ပုန်းရှောင်နေရ အပြည့်အစုံ
- မလေးရှားအရာရှိများ လူကုန်ကူးမှုမှာ ပါမပါ အမေရိကန်စုံစမ်း အပြည့်အစုံ
- ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ကမ္ဘာကို ဖြန့်ဖို့စီစဉ် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာစီးပွားရေးသမားအချို့အပေါ် ပိတ်ဆို့မှု တိုးချဲ့ အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာအပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ အားမြှင့်လုပ်ဆောင်နေကြ အပြည့်အစုံ
- မြောက်ကိုရီးယားလက်နက်ပညာရှင်တဦး မိတ္တီလာတွင် သေဆုံး အပြည့်အစုံ
- လယ်သိမ်းပြီး ဘုရားတည်မှုကို သံဃာ့မဟာနာယက ဘက်လိုက်ဖြေရှင်း အပြည့်အစုံ
- မကွေးမြသလွန်စေတီ ပုရ၀ုဏ်တိုးချဲ့ရန် ကျပ်သိန်းတထောင် ထောက်ခံမည် အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်လေဘေးကူညီရေး သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့ ထိုင်းဆူနာမီဘေးသင့်ဒေသ၌ လေ့လာ အပြည့်အစုံ
- စီးပွားပျက်ကပ်အရေး မြန်မာပညာရှင်များ ဆွေးနွေး အပြည့်အစုံ
- “ဒီမိုကရေစီကိုတော့ မမြင်ရသေးပါဘူး” (အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- ကရင်သူပုန်များကို တိုက်ခိုက်ရန် နောက်ထပ်တိုက်ပွဲ မကြာမီ စတင်မည် အပြည့်အစုံ
- နွားခိုးဂိုဏ်များကြောင့် မြေပုံမြို့နယ်မှ တောင်သူလယ်သမား အခက်ကြုံ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်သူများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် စည်းရုံးနေ အပြည့်အစုံ
- Activists Welcome New Thai Government's Policy Stance on Burma အပြည့်အစုံ
- U.S. Freezes Assets of2Burmese Businessmen Who Backed Military Junta အပြည့်အစုံ
- Caritas pleased with donor response to Burma (Myanmar) appeal အပြည့်အစုံ
- Eight Myanmar NGOs receive new grants from the Three Diseases Fund အပြည့်အစုံ
- Why Another Insane Government? အပြည့်အစုံ
- မက်စ်မြန်မာ ဦးဇော်ဇော်နှင့် ဒဂုံ ဦးဝင်းအောင်ကို အမေရိကန်အစိုးရက စီးပွားရေးဒဏ်ခတ် အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်ဒဏ်ခတ်မှုကို မဝေဖန်လိုဟု မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ပြော အပြည့်အစုံ
- တက္ကစီအားလုံး မီတာတပ်ရန် အမိန့်ထုတ် အပြည့်အစုံ
- မန္တလေး-မုံရွာ ပဲခွဲစက်များ ရပ်ဆိုင်းထားရ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့ယွန်းလုပ်ငန်း ပျက်လုနီးပြီ အပြည့်အစုံ
- ဒဂုံဝင်းအောင်နှင့် Max ဇော်ဇော်တို့ကို USက ဒဏ်ခတ် အပြည့်အစုံ
- စစ်အစိုးရအပေါင်းအဖော် သူဌေးကြီးနှစ်ဦးကို အမေရိကန်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အပြည့်အစုံ
- ရွှေမုဆိုး (ရသဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- နေရာအနှံ့အပြား အအေးပိုလာနေ အပြည့်အစုံ
- နအဖနှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံသားများနေထိုင်ရာ ကျေးရွာကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဖျက်ခိုင်း အပြည့်အစုံ
- U.S. Freezes Assets of2Burmese Businessmen အပြည့်အစုံ
- Burma: Crackdown on churches in Rangoon အပြည့်အစုံ
- Burma: CSW condemns crackdown on churches in Rangoon အပြည့်အစုံ
- U.S. Probing Migrant-Extortion Racket အပြည့်အစုံ
- Dhaka to demarcate maritime boundaries in Bay of Bengal အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၅ ရက်
- သမ္မတသစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲ (ဗွီဒီယိုသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ဦးခေါင်းခွံပြင်ပ ဦးနှောက်ရောက်နေသည့် ကလေးငယ် ဆေးကုရန် လိုအပ်နေ အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာ ကုလရုံးဝင်း ဗုံးဆံထိမှန်မှု အတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှုတ်ချ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်သည့်စာရင်း အမေရိကန် ဖြည့်စွက် အပြည့်အစုံ
- မြစ်ဝကျွန်းပေါ် လယ်သမားများ စိုက်ပျိုးစရိတ် အခက်ကြုံ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ထိုင်းဘက်က မောင်းထုတ် အပြည့်အစုံ
- ဆန်ဈေးကျလို့ ထိုင်းလယ်သမားများ ကြွေးဒဏ်ပိ အပြည့်အစုံ
- အရှေ့တီမောသမ္မတရဲ့ မြန်မာအရေးသုံးသပ်ချက်အပေါ် တုန့်ပြန်ချက် (ဗွီအိုအေ မျက်မှောက်ရေးရာ) အပြည့်အစုံ
- အမျိုးသမီးများအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်(ဗွီအိုအေ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ) အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်ရှိနေဆဲ အပြည့်အစုံ
- အကြီးဆုံး နဂါးရုံဘုရားတည်ရန် လယ်မြေသိမ်းမှု နယ်ခံများမကျေနပ် အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းအာဏာပိုင်များ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရွာကို ဖျက်သိမ်းခိုင်း အပြည့်အစုံ
- မလေးရှား-ထိုင်းနယ်စပ် လူမှောင်ခိုမှု အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် စုံစမ်း အပြည့်အစုံ
- အလုပ်ကြမ်းစခန်းရောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရ အပြည့်အစုံ
- ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲမည်ဟု တရားဝင်ပြောဆို အပြည့်အစုံ
- ပူတာအိုထောင်မှာ ထောင်ဝင်စာတွေ့ရေး ခက်ခဲ အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာအပစ်ရပ် သဘောတူညီချက်ရဖို့ ကုလအကောင်းမြင် အပြည့်အစုံ
- သက်တမ်းရှည် ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၁) (သတင်းဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- သက်တမ်းရှည် ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၂) (သတင်းဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ အပြည့်အစုံ
- ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်ကပြောတဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဆရာကြီးများအမြင် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာအလုပ်သမားများ နေအိမ်ဖျက်ပြီး တောထဲတွင် ပုန်းအောင်းနေရ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေး (အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- U.S. freezes assets of "regime cronies" in Myanmar အပြည့်အစုံ
- Myanmar to hold gems emporium in March အပြည့်အစုံ
- US slaps more sanctions on Myanmar regime backers အပြည့်အစုံ
- UN agencies team up on family planning for refugees in Thailand အပြည့်အစုံ
- US hits Myanmar with additional sanctions အပြည့်အစုံ
- Vice President Ansari to visit Myanmar in February အပြည့်အစုံ
- TCG study tour to Thailand shares experience and lessons learnt in natural disaster management အပြည့်အစုံ
- Myanmar: Cyclone recovery "will take up to four years အပြည့်အစုံ
- ဒေါက်တာစိန်ဝင်း စင်ပြိုင်အစိုးရ သက်တမ်းမရှိတော့ဟု ဒေါ်စန်းစန်းပြော အပြည့်အစုံ
- ယခုနှစ် ဘွဲ့တံဆိပ်တော်လျှောက်သည့် သံဃာနည်းပါး၊ ဓမ္မကထိက ဆရာတော်များအား စစ်အစိုးရက လိမ် လျှောက်ခိုင်း အပြည့်အစုံ
- ပူတာအိုထောင်က ကိုအောင်သူ ကျန်းမာရေးမကောင်း အပြည့်အစုံ
- ဆန္ဒပြ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ် ၆ ဦး ပြန်လွတ်၊ ၃ ဦးကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲ အပြည့်အစုံ
- ဓာတ်တိုင်စိုက်ရန် တအိမ်ထောင် ကျပ် ၅,၀၀၀ အဓမ္မကောက် အပြည့်အစုံ
- အအေးလှိုင်း ရိုက်ခတ်ဖွယ်ရှိ အပြည့်အစုံ
- ဆန္ဒပြ အန်အယ်ဒီလူငယ် ၆ ဦး ပြန်လွတ်လာ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲရန် အချိန်တန်ပြီဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား အပြည့်အစုံ
- ကျောင်းသား ထောင်ဒဏ် ၁၀၄ နှစ် အပြည့်အစုံ
- ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် တို့တိုင်းဌာနေ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ရဲဘက်စခန်းများတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်နေရ အပြည့်အစုံ
- ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် တရုတ်ဘက် ရွေ့ပြီလား အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းက မြန်မာ့အရေး ပိုမိုလုပ်ဆောင်မည် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့ရွှေဈေးကွက် အေးစက် အပြည့်အစုံ
- ပြန်ပို့ခံရသည့် မြန်မာ ၄ ဦး ကော့သောင်းရဲ ဖမ်း အပြည့်အစုံ
- သတင်းသမားများနှင့် ၂၀၀၈ (အထူးဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာစစ်အစိုးရကို လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ အပြင်းအထန် ဝေဖန် အပြည့်အစုံ
- ရဲဘက်စခန်း အပို့ခံရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရ အပြည့်အစုံ
- ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းဝင် လယ်သမားတွေကို ဦးစားပေးငွေချေး အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ရေး ဆန္ဒပြလို့ အဖမ်းခံရသူ လူငယ် ၉ ဦးထဲက ၆ ဦး ပြန်လွတ် အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်သင့်ပြီဟု ရှေ့နေပြော အပြည့်အစုံ
- ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး ကြေညာချက်တခု ရန်ကုန်၌ ပျံ့နှံ့နေ အပြည့်အစုံ
- ရေနံတွင်းမီးလောင်မှု အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ တူ ပါဝင် အပြည့်အစုံ
- စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းပေမယ့် ပြည်သူတွေ မ၀ယ်နိုင် အပြည့်အစုံ
- ဦးသန်းရွှေ ပြန်ပြီးနောက် ဇလွန် မယက အဖြုတ်ခံရ၊ ခယက နယ်ပြောင်းခံရ အပြည့်အစုံ
- နှစ်သစ်ဦးနဲ့အတူ (အမှတ်တရများ) အပြည့်အစုံ
- မဖြစ်မနေ ငွေပေးဆောင်ရမှုကြောင့် ပြည်သူများ အခက်တွေ့ အပြည့်အစုံ
- အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပုံစံအသစ်လော၊ အပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ နိဂုံးလော (မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီ တာ့အာဘော်) အပြည့်အစုံ
- THAILAND: Addressing sexual violence in Mae La refugee camp အပြည့်အစုံ
- Burma: India Uncut congratulates Ashin Mettacara အပြည့်အစုံ
- Vietnam army phone firm seeks Myanmar, N.Korea work အပြည့်အစုံ
- Activist jailed 104 years အပြည့်အစုံ
- Thai PTTEP to write off $27 mln for Myanmar M3 block အပြည့်အစုံ
- Myanmar arrested 277 drug traffickers in December အပြည့်အစုံ
- Burma: Left to burn on hot sand - how the Thai Navy punishes Burmese refugees အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၄ ရက်
- စင်ပြိုင်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်အသစ် ရွေးချယ်မည် အပြည့်အစုံ
- ဦးဝင်းတင်ပြောစကား မှားယွင်းသတင်းရေးမိကြောင်း ရန်ကုန် ဒီပီအေသတင်းထောက် ၀န်ခံ အပြည့်အစုံ
- ကြံ့ဖွံ့အသင်း နိုင်ငံဦးဆောင်ရန်အသင့်ဟု ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော် ပြော အပြည့်အစုံ
- ဆရာဝန် ၈ ဦး တပြိုင်တည်း အလုပ်ဖြုတ်ခံရ၊ မတရား အထုတ်ခံရဟု ဆရာဝန်များက ယူဆ အပြည့်အစုံ
- အမိန့်မျိုးစုံကြောင့် ဈေးသည်များ ဒုက္ခရောက် အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်-စစ်တွေ MAI လေယာဉ်ခများ တိုးမြှင့်၊ ဒေသခံခရီးသွားများ အခက်တွေ့ အပြည့်အစုံ
- လယ်သမားများ အရှုံးပေါ်နေ အပြည့်အစုံ
- လောင်စာဆီလှောင်သူများ အကြီးအကျယ်အထိနာ အပြည့်အစုံ
- ချင်းပြည် ကပ်ဆိုက်ဆဲ အပြည့်အစုံ
- လူငယ်တဦး ထောင် ၁၀၄ နှစ် ချခံရ အပြည့်အစုံ
- ဘုရားစူးဂျာနယ်လစ်များ၏ ချစ်ကြည်ရေးမိတ်ဆုံစားပွဲ (ထွေရာလေးပါး) အပြည့်အစုံ
- ဖျာပုံထောင်ဖောက်ပြေးသူ အကျဉ်းသား ၂၀ ကျော် ဖမ်းမိ အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနှင့် လိပ်ပြာအကျိုးသက်ရောက်မှု (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ARV ဆေးမရလျှင် လူငယ်ထု သိန်းချီကာ အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်ပွားလာနိုင် အပြည့်အစုံ
- ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တစည မဲဆွယ်လုပ်ငန်း စတင် အပြည့်အစုံ
- အမှန်တရားမှလွဲ၍ ဘာမှမရှိပါ (ရုပ်ရှင်အညွှန်း) အပြည့်အစုံ
- တရုတ်စစ်ထရပ်ကားကြီးများ မြန်မာသို့ လွှဲပြောင်း အပြည့်အစုံ
- အနောက်အရပ်ရဲ့ အနောက်ဖက်လွန်မြစ်များ (ကဗျာ) အပြည့်အစုံ
- အလင်းရနံ့ဂျာနယ် အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးလ်ကြည်းတပ် ဂါဇာစီးတီးမြို့ထဲ ၀င်တိုက် အပြည့်အစုံ
- ဟီလာရီကလင်တန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရာထူးအတွက် လွှတ်တော်ရှေ့မှောက် ထွက်ဆို အပြည့်အစုံ
- သမိုင်းမှာ တချက်မှားခဲ့လို့ နှောင်လာနောက်သားတွေ တသက်လိုက်လို့ မမီခဲ့တဲ့အကြောင်း (ဗွီအိုအေ တိုက် ရိုက်လေလှိုင်း အစီအစဉ်) အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်အစိုးရသစ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ အပြည့်အစုံ
- စီးပွားရေးကင်းလွတ်ခွင့် အကင်းမဲ့ဆုံး ၄ နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင် အပြည့်အစုံ
- စစ်တပ်အရာရှိ ၂ ဦး ကာရာအိုကေဆိုင်တွင်း သေနတ်ကိုင်ရမ်းကား အပြည့်အစုံ
- ဂျီတီစီကျောင်းသား ၂ ဦး သေဆုံးမှုကို အာဏာပိုင်များ လျစ်လျူရှု အပြည့်အစုံ
- မြန်မာပြည်သားများအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ၂ ဦး ဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- ဘုရားစာ တသောင်းကျော် ဖြန့်ဝေပြီးဟု ကမ်ပိန်းအဖွဲ့က ပြော အပြည့်အစုံ
- ဒီဗွီဘီ နိုင်ငံတကာသတင်း အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲကို လိုလား အပြည့်အစုံ
- စီးပွားပျက်ဂယက် မြန်မာနိုင်ငံသို့သက်ရောက်မှု ပိုထင်ရှားလာ (သတင်းဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- အပျော်တမ်းသတင်းထောက် သို့မဟုတ် စီတီဇင်ဂျာနယ်လစ် သြဇာသစ် အပြည့်အစုံ
- အပြေးအလွှားသတင်းများ ရန်ကုန် အပြည့်အစုံ
- ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရာ၌ သတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုပေးရ အပြည့်အစုံ
- တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်တဲ့ မောင်တောနယ်စပ်က မီးဘေးဒုက္ခသည် အပြည့်အစုံ
- နယ်စပ်တွင် ဓားပြနှစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရ အပြည့်အစုံ
- မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စပါးဈေးများ ကျဆင်းနေ အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာအလုပ်သမား ၁၇၀ ဦး အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- Myanmar dissident gets 104 years in jail အပြည့်အစုံ
- 18 illegal immigrants flee Indonesian detention အပြည့်အစုံ
- Burma: Cyclone Donors Should Ensure Transparency and Accountability အပြည့်အစုံ
- ယခုနှစ်ခရီးသွားကာလအတွင်း စစ်တွေဟိုတယ်ကမ်းခြေသို့လာရောက်အပန်းဖြေသောခရီးသွားများရှိလာ၊ အဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုများပြုလုပ်လာပါက ခရီးသွားများအားပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိ အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၃ ရက်
- သင်္ကြန်စာကို စစ်အစိုးရအာဘော်ဖြင့် ထုတ်ဝေ အပြည့်အစုံ
- ဒလအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို ဖောက်ခွဲရေးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး အပြည့်အစုံ
- နေပြည်တော်မှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ လုပ်ခပုံမှန်မရ အပြည့်အစုံ
- ကူဝိတ်-မြန်မာသံအမတ်နေရာ အပြိုင်လုနေ အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်အတွက် နိုင်ဂျီးရီးယား အကူအညီကိစ္စ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ စောဒကတက် အပြည့်အစုံ
- မုန်တိုင်းအကူအညီ ဖြန့်ဖြူးရေး ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆွေးနွေး အပြည့်အစုံ
- မန္တလေးထောင်ရှိ ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များကို ထောင်ဝင်စာပိတ် အပြည့်အစုံ
- အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ အန်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ်မှာ ပြုလုပ် အပြည့်အစုံ
- ဗကသခေါင်းဆောင်တွေအတွက် အယူခံဝင်မယ် ပြော အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာအရေးဖြေရှင်းဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် အရှေ့အလယ်ပိုင်း သွားမည် အပြည့်အစုံ
- ရုရှားဓာတ်ငွေ့ ပြန်ပို့သော်လည်း ဥရောပ အလုံအလောက် မရသေး အပြည့်အစုံ
- တရုတ်ပို့ကုန် သွင်းကုန်တွေ ကျဆင်းနေ အပြည့်အစုံ
- ဆည်းဆာသံဝေ (အတွေးအမြင်) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် စင်္ကာပူ ၂ ဦး အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းပျက်များ ထိုင်းပြင်မည် အပြည့်အစုံ
- အရပ်သားလွတ်လပ်မှု အဆိုးဆုံးနိုင်ငံများမှာ မြန်မာပါဝင်ဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ပြောဆို အပြည့်အစုံ
- မူးယစ်ပေါများသွားတာက (အယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာ) အပြည့်အစုံ
- ၈ လ ကြာသော်လည်း အကူအညီများ လိုအပ်နေဆဲ နာဂစ်ဒေသ အပြည့်အစုံ
- ညီအကိုနှစ်ဦး အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- Thai FM reviews cyclone victims aid with Myanmar official အပြည့်အစုံ
- Who's afraid of Shirin? အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန် ဒီပီအေသတင်းထောက်အမှု စတင်စစ်နေပြီဟု ဂျာမဏီ ဒီပီအေဌာနချုပ်မှ အကြောင်းပြန် အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈-၂၀၀၉ စစ်အစိုးရ ဘတ်ဂျက် ကျပ်ငွေဘီလီယံ ၇၀၀ ကျော် လိုငွေပြ အပြည့်အစုံ
- Wi-Fi အင်တာနက်စနစ် ရောင်းချခြင်းမပြုရန် တားမြစ် အပြည့်အစုံ
- ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်အာဏာနဲ့ဖျက်လို့ မပျက်နိုင် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ နှင့် ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်း (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာ ရင်ဆိုင်ရတော့မည် အပြည့်အစုံ
- ဆေးကြောင့် လေးမှာစိုး (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ရေး ဘိုကလေးမှာ စည်းဝေး အပြည့်အစုံ
- ပါတီထောင်လိမ့်မယ် သို့သော်လည်း ကေအိုင်အိုမဟုတ် (ဒေါက်တာတူးဂျာနှင့် စကားစမြည်) အပြည့်အစုံ
- ၈ လ ကြာသော်လည်း အကူအညီများ လိုအပ်နေဆဲ နာဂစ်ဒေသ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဒေါင်မရေ ကလိုက်ချည်သေး (ရသဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာမှာ ချက်ချင်းအပစ်အခတ်ရပ်ဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် တောင်းဆို အပြည့်အစုံ
- မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ခွင့် နိမ့်ကျဆဲ၊ Freedom House အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာအပေါ် အနောက်နဲ့မတူတဲ့ ချဉ်းကပ်မှု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကျင့်သုံးမည် အပြည့်အစုံ
- လက်နက်ကိုင်မှုနဲ့ လွတ်လပ်မှု (ဗွီအိုအေ မျက်မှောက်ရေးရာ) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့စပါးအထွက်နဲ့ ဆန်အရောင်းအ၀ယ်တွေ ဘယ်လိုရှိနေလဲ အပြည့်အစုံ
- စီးပွားရေးနိုးထမယ့်အစီအစဉ် အမြန်ဆုံးအတည်ပြုဖို့ လွှတ်တော်ကို အိုဘားမားတိုက်တွန်း အပြည့်အစုံ
- ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဖြစ်လာတော့မယ့် ဒေါက်တာဆူဆန်ရိုက်စ်အကြောင်း တစေ့ တစောင်း အပြည့်အစုံ
- စစ်အစိုးရနဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အပြည့်အစုံ
- မော်လမြိုင်လေယာဉ်ကွင်းအနီး မီးလောင် အပြည့်အစုံ
- ကုန်ဈေးနှုန်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ငွေလဲနှုန်း အပြည့်အစုံ
- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအချို့ ကျောင်းအပ်နောက်ကျ၍ တနှစ်နစ်နာ အပြည့်အစုံ
- ထောင်ဝင်စာတလပိတ်ထားပေမယ့် လာရှိူးထောင်က ခွင့်ပြု အပြည့်အစုံ
- ဒလမြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်နှစ်ဦးကို အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီး အပြည့်အစုံ
- ခရစ်ယာန်ဘုရားဝတ်ပြု ဘုရားကျောင်းငယ်တွေကို အာဏာပိုင်တွေ ပိတ်ပင် အပြည့်အစုံ
- ဘိုကလေးစည်ပင်ကြောင့် လမ်းဘေးဈေးသည်များ အခက်ကြုံ အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်ပြည်၊ တက်ဆက်နယ်၊ ဒါးလတ်စ်မြို့ ဆေးရုံမှာ ချင်းလူငယ်တဦး သောင်တင်နေ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာ ပိုကြီးထွားလာနိုင်ဟု RCSS ပြော အပြည့်အစုံ
- မူဆယ်တွင် အိမ်ထောင်စုစာရင်းများ အိမ်ရှေ့ကပ်ခိုင်းထား အပြည့်အစုံ
- ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံတွင် မာရမာကြီး အမျိုးသားတဦး ပထမဆုံး စက်မှုဝန်ကြီးဖြစ်လာ အပြည့်အစုံ
- Burma: Villagers forced to work on junta's oil seed plantations အပြည့်အစုံ
- Singapore: Political protests nixed work permit renewals အပြည့်အစုံ
- Burma, Myanmar: Thank You Google အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၂ ရက်
- ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် စစ်တွေမြို့မှ မော်တော်ယာဉ်များ ချောဆွဲခံရ အပြည့်အစုံ
- နာဂစ် နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ဧပြီလအလွန် ပြတ်လပ်ဖွယ်ရှိ အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဖြစ်ဖို့ သမ္မတဘုရ်ှ တိုက်တွန်း အပြည့်အစုံ
- ဥရောပသို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သယ်ယူရေး ရုရှား-ယူကရိန်း သဘောတူညီချက်သစ် ရရှိ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ဆို အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ပြော အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့အရေးဆန္ဒပြသူ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားနှစ်ဦး အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ် မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ မြင်လို အပြည့်အစုံ
- ကုမ္ပဏီများ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကြောင့် ဖားကန့်လူထု ဒုက္ခရောက် အပြည့်အစုံ
- မြေနုကျွန်းများကို သိမ်းယူပြီး အာဏာပိုင်များ ပြန်ရောင်းစား အပြည့်အစုံ
- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးအမှု ရှေ့နေလွှဲစာတင်ခွင့်မရ အပြည့်အစုံ
- ချင်းပြည်နယ် ရိက္ခာရှားပါးမှုကို အရေးပေါ် ထောက်ပံ့ကူညီနေရ အပြည့်အစုံ
- မကွေးရေနံမြေ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ထား အပြည့်အစုံ
- မြန်မာကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမည်မဟုတ်ကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား အပြည့်အစုံ
- လေးဖြူ စင်မြင့်ဖျော်ဖြေရေး တကျော့ပြန်လာမည် အပြည့်အစုံ
- ၀မ်းတွင်းမြို့နှင့် မိတ္ထီလာစက်မှုဇုံမှာ ခိုးဆိုးလုယက်မှု ထူပြော အပြည့်အစုံ
- တရားဆိုင်အမတ်နှစ်ဦးကို ရှေ့နေများနှင့်တွေ့ဆုံခွင့် ပိတ်ပင် အပြည့်အစုံ
- အီလက်ထရွန်နစ် ဈေးကွက်ပျက် အပြည့်အစုံ
- အနောက်မှပိတ်ဆို့မှု ပြန်သုံးသပ်ဟု အရှေ့တီမော တိုက်တွန်း အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တဦးကို ထောင် ၁၅ နှစ် ထပ်တိုး အပြည့်အစုံ
- အိမ်ရှင်မများအဖွဲ့ နာယက ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ အလွန်မှာ လူငယ်တွေ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတာဝန် ယူလာနိုင်ခြေရှိမရှိ အပြည့်အစုံ
- မန္တလေးကျောင်းသားလူငယ် ၁၁ ဦးကို ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ် အပြည့်အစုံ
- ကချင်ပြည်နယ်နေ့တွင် ကချင်ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- အနာဂတ်ပညာရေး ချင်းမိုင်မြို့တွင် ဆွေးနွေး အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ပြည်ပအလုပ်သမားများ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးပေးမည် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့အရေး ဆန္ဒပြသူ စင်္ကာပူ ၂ ဦး ထိန်းသိမ်းခံရ (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ကေအန်ယူသိမ်းလိုက်သော စစ်တပ်ဆန်အတွက် ကားသမားများ လျော်ကြေးပြန်ပေးရ အပြည့်အစုံ
- (၄၆)နှစ်မြောက် ပလောင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- Abhisit calls for change in Burma အပြည့်အစုံ
- MYANMAR: Capacity challenges remain အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲမြင်ချင်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အာဘီဆစ်ပြော အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန် ဒီပီအေသတင်းထောက်အား အရေးယူရန် အတိုက်အခံများ ဒီပီအေသတင်းဌာနကို ဖိအားပေးပြီ အပြည့်အစုံ
- ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဆောက်သည့် မင်္ဂလာဒုံအ၀င်မုခ်ဦး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဖြိုချ အပြည့်အစုံ
- ကရင်သူပုန်များ တိုက်ခိုက်ခံနေရ အပြည့်အစုံ
- မြိုင်ရေနံမှော်တွင် အခြေနေများ တင်းမာနေဆဲ၊ ပွဲစား(၁၀)ဦးခန့် အဖမ်းခံထားရ အပြည့်အစုံ
- အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းမည့် အစီအစဉ်အပေါ် သူတို့အမြင် (၂) အပြည့်အစုံ
- ပုဂံညောင်ဦး တောင်ကူးမြောက်ပြေး စီးပွားရေးသံသရာ (သတင်းဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာကို ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ရေး အစ္စရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ ဆွေးနွေး အပြည့်အစုံ
- ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရဘဲ လှည့်ပြန်ရ၍ ငွေကုန် လူပန်း အပြည့်အစုံ
- လွမ်းဖွယ့် မိတ်ဆွေများ (ပန်းချီစံတိုး - ၁၉၄၁-၂ဝဝ၂) (အမှတ်တရများ) အပြည့်အစုံ
- ရေပြင်ပိုင်နက်သတ်မှတ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ရေးသည် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့အစိုးရသစ်အတွက် အထူးဦး စားပေးလုပ်ငန်းဖြစ် အပြည့်အစုံ
- Changes in Myanmar wanted အပြည့်အစုံ
- Myanmar Rat Infestation Causing Food Crisis - NGO အပြည့်အစုံ
-2arrested for protest အပြည့်အစုံ
- Burma: Myanmar Blog Academy Award 2008 Winners Announced အပြည့်အစုံ
- Myanmar to take part in int'l yachting tournament အပြည့်အစုံ
- Horizon Open 2009 Table-Tennis Championship to be held in Myanmar အပြည့်အစုံ
- International Artists Collaborate in Fight for Freedom အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၁ ရက်
- စစ်အစိုးရကို နိုက်ဂျီးယားနိုင်ငံက ငွေတိုက်ရိုက်လှူဒါန်းတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်မကင်းဖြစ် အပြည့်အစုံ
- ဗကသခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကို အင်းစိန်ထောင်ဆေးရုံ တင်ထားရ အပြည့်အစုံ
- ရေနံမြေအဓိကရုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူ ၂၀ ကျော်ဖမ်းပြီး ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထား အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုတွေ တိုးပွားနေကြောင်း ဆွေးနွေးချက် (အာရ်အက်ဖ်အေ တနင်္ဂနွေ ဆွေးနွေးပွဲ) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားမှုအပေါ် အရှေ့တီမော သမ္မတက ဆန့်ကျင် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အရှေ့တီမောသမ္မတ တိုက်တွန်း အပြည့်အစုံ
- မြန်မာပြည်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အရှေ့တီမောသမ္မတ ကန့်ကွက် အပြည့်အစုံ
- မုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၂၆၀ ပါ ခရီးသည်တင်သင်္ဘော အင်ဒိုနီးရှားမှာ တိမ်းမှောက် အပြည့်အစုံ
- အစိုးရချေးငွေမရလို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က လယ်သမားတွေ နွေစပါးစိုက်ဖို့ အခက်အခဲတွေ့နေ အပြည့်အစုံ
- ပို့ကုန်ဝင်ငွေ တန်ဖိုးကျတဲ့အတွက် ဆန်ပို့သူလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ လယ်သမားတွေ အရှုံးပေါ်နေ အပြည့်အစုံ
- အစိုးရသစ်တက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ထိုင်းနိုင်ငံ ကြားဖြတ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ် အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပြည့်လုနီးပြီလို့ ပြော အပြည့်အစုံ
- ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၉) - မေ့ကွက်ကိုရှာ (ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဆရာသိန်းဖေမြင့်၏ စာပေအရှိန်အဝါ (ဒီဗွီဘီ အသံလွှင့်ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်သယာယအသင်း နှစ်ပတ်လည်အသင်း အစည်းအဝေး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည် အပြည့်အစုံ
- ထောင်သက်တမ်းပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံခြားသားအများအပြားကို ဘင်္ဂလားမှ လွှတ်ပေးမည်ဆို အပြည့်အစုံ
- မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အပိုင်း ၃ (မှတ်စုမှတ်တမ်း) အပြည့်အစုံ
- အပစ်ရပ်တောင်းဆိုချက်ကို အန်တု၊ အစ္စရေးလ်နဲ့ ဟားမတ်စ် ဆက် တိုက်နေကြ အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာမှာ စစ်ဆင်ရေးအရှိန်မြှင့်မယ်လို့ အစ္စရေးပြော အပြည့်အစုံ
- ကချင်နှစ်သစ်ကူးမနောပွဲ မြစ်ကြီးနား၌ ကျင်းပနေ အပြည့်အစုံ
- ဒီဗွီဘီနိုင်ငံတကာသတင်း အပြည့်အစုံ
- မြိုင်ရေနံမြေ၌ အရေးဆိုသူများကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်၍ အမျိုးသမီး တဦး ဒဏ်ရာရ၊ ရေနံကုမ္ပဏီမီးလောင်မှု၌ မသင်္ကာသူများကို ရဲကဖမ်း အပြည့်အစုံ
- East Timor president opposes international sanctions on Burma အပြည့်အစုံ
- Myanmar to grant more blocks for gem mining အပြည့်အစုံ
- Private companies in Myanmar propose to cultivate more timber အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁၀ ရက်
- အစ္စရေးအပေါ်ရပ်တည်ချက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခုခံကာကွယ် အပြည့်အစုံ
- စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်မှုကြောင့် အမေရိကန်အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ များလာ အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဘဏ္ဍာရေးမှူး ကိုမင်းအောင် နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ထပ်တိုး အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးပေးနေပြီ အပြည့်အစုံ
- ကိုဇော်သက်ထွေးဇနီး ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ ရဲဘက်စခန်းပို့ အပြည့်အစုံ
- မိတ္ထီလာမထသ ချောကြေးကောက်ငွေ သိန်းသုံးရာကျော် ပျောက်ဆုံးနေ အပြည့်အစုံ
- ကချင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှု အပြည့်အစုံ
- ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကချင်ပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးက ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေ တိုးလုပ်မယ်လို့ သတိပေးလိုက် အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုက မြန်မာ့စီးပွားရေးကို ရိုက်ခတ်နေပြီ အပြည့်အစုံ
- တင်မောင်ဦး၏ သတ္တမမြောက် တကိုယ်တော်ပြပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ်၌ လူမှုဒုက္ခအကျပ်အတည်းများ ပိုမိုလာဖွယ်ရှိဟု NGO ပြော အပြည့်အစုံ
- စင်ပြိုင်အစိုးရသစ်ပေါ်ပေါက်ရေး စတင်လုပ်ဆောင်ပြီဟု အန်စီယူဘီ ပြောကြား အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့ဆန်ဈေးထိုးကျ အပြည့်အစုံ
- ကချင်ပြည်နယ်၌ ရဲများ တာဝန်မဲ့ အကျင့်ပျက် အပြည့်အစုံ
- မလေးရှား၌ မြန်မာအလုပ်သမားများ အဖမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- လောင်းကစားဝိုင်းမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ် အစီး ၅၀ ကျော် သိမ်းဆည်းခံရ အပြည့်အစုံ
- ဂီနီရွေးကောက်ပွဲ ခြောက်လအတွင်းမလုပ်ရင် အာဖရိကသမဂ္ဂ အရေးယူမည် အပြည့်အစုံ
- ဆေးလိပ်အန္တရာယ် ထင်တာထက် ဆိုးရွား အပြည့်အစုံ
- ကဗျာဆရာ အံ့မောင်က ဒဂုန်တာရာကို လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ကဗျာနဲ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့ အပြည့်အစုံ
- စင်္ကာပူက ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့ မြန်မာမိသားစုတို့ နှစ်သစ်ကူး ဘုရားဖူးခရီးစဉ်မြင်ကွင်း၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီက ၆၁ နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပွဲ အနုပညာရှင်ကြီးများနှင့် ကျင်းပခဲ့သည့်မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- Myanmar launches polio immunization drive အပြည့်အစုံ
- Myanmar boat people take up refuge in Sabang အပြည့်အစုံ
- CWS Hotline - 12 Jan 2009 : OPT, Myanmar, Sudan အပြည့်အစုံ
- Myanmar continues efforts in eradication of polio အပြည့်အစုံ
- Myanmar intensifies measures to stop bird flu at borders အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၉ ရက်
်- ရေနံလုပ်သားများ မီးရှိူ့ဆန္ဒပြမှုကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း အပြည့်အစုံ
- မြိုင်ရေနံမှော် အလုပ်သမားအဓိကရုဏ်း စစ်တပ်က ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်း အပြည့်အစုံ
- မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် လုပ်အားနှင့် ရိက္ခာလဲလှယ်ရေး အပြည့်အစုံ
- ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ၁၀ နှစ်မြောက် အိန္ဒိယမှာ ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ ကုလဆုံးဖြတ်ချက် အစ္စရေး ဟားမတ်စ် ပယ်ချ အပြည့်အစုံ
- ကုလဆုံးဖြတ်ချက် အာခံ၊ ဂါဇာတိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ် အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာဒေသ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကုလတောင်းဆို အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းမှာ ပြည်ပလုပ်သားတွေ သက်တမ်းတိုးရက် ထွက်လာ အပြည့်အစုံ
- ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဟာ ပါတီဖြစ်သင့်သလား (ဘီဘီစီ ဆွေးနွေးခန်း) အပြည့်အစုံ
- Windows7beta (၀င်းဒိုးစ်ဆဲဗင်း အစမ်းဗားရှင်း) လာပြီ မြန်မြန်သွားယူ အပြည့်အစုံ
- ပင်လယ်ဖြတ်၍ အလုပ်ရှာဖွေသူများ (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ကချင်သူပုန်များက ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မည်ဟု သံန္နိဌာန်ချ အပြည့်အစုံ
- အင်ဒိုရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများကိစ္စ စစ်ဆေးမှုပြုနေဆဲ အပြည့်အစုံ
- လုပ်အားပေးခိုင်းစေသူ ကျေးရွာအာဏာပိုင်များ စစ်ဆေးခံနေရ အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း စစ်အစိုးရ၀င်ငွေကို ထိခိုက် အပြည့်အစုံ
- ပြည်သူ့အသက်နဲ့ နန်းဆက်သူ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- စစ်အစိုးရက နဖားကြိုးဆွဲခေါ်တိုင်း အန်န်အယ်လ်ဒီ မလိုက်နိုင် အပြည့်အစုံ
- အခြေခံဥပဒေ မပြင်မချင်း ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ မစဉ်းစားဟု ဦးဝင်းတင် ပြောကြား အပြည့်အစုံ
- နယ်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များက အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်စေလို အပြည့်အစုံ
- ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံရေးပါတီ ကချင်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီက ဦးစီးဖွဲ့မည် အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြောင်းရေးသူ အယ်ဒီတာ စာပေစိစစ်ရေးက ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီပေးပွဲ အနုပညာရှင်များ စိတ်မ၀င်စား အပြည့်အစုံ
- မော်လမြိုင် မီးလောင်ဆိုင်ခန်း နေရာမချနိုင်သေး အပြည့်အစုံ
- စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့် ရေနံမှော်ပါ ဒုက္ခရောက် အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်ကြောင့် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန အခက်တွေ့ အပြည့်အစုံ
- ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်နှစ်ပါတီ ပြိုင်ခွင့်ရမလဲ (သတင်းသုံးသပ်ချက်) အပြည့်အစုံ
- စင်ပြိုင်အစိုးရအရှုပ်တော်ပုံကိစ္စ ဦးခွန်မာကိုဘန်းနှင့် ဦးစိန်ကျော်လှိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ်သစ်ကူး နှိုးဆော်မှုကို လျစ်လျူရှူ မနေသင့် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) အပြည့်အစုံ
- လေးဖြူ ပြန်လာပြီ အပြည့်အစုံ
- မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မွေးနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ လာရောက်ပူဇော်ကြ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ရဲဘက်စခန်းပို့ပြီ အပြည့်အစုံ
- မှတ်ပုံတင်ပျောက် နာဂစ်ဒုက္ခသည်များ အခက်အခဲဖြစ် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အပေါ် ဒါရိုက်တာတဦး၏ ရှုမြင်ချက် (အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- မူဆလင်ဘာသာဝင်များ လူနေအိမ်ခန်းမှာ ၀တ်ပြုခွင့်မပေး အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထောင်ဝင်စာ ပိတ်ပင် အပြည့်အစုံ
- ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လေယာဉ်ပျက်နှစ်စီး နပခဌာနချုပ်မှ ရှာဖွေမှုလုပ် အပြည့်အစုံ
- တရားမ၀င်ရွှေကျင်းသွား ယာဉ်များကို ရဲက ငွေတောင်း အပြည့်အစုံ
- ဆူဒန်သမ္မတ ခုံရုံးတင်ရေး တရုတ်သဘောမကျ အပြည့်အစုံ
- အိုဘားမားရဲ့ စီးပွားရေးမိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
- ဖားကန့်၌ ကျောက်စိမ်းတွင်း ပေါက်ကွဲ၍ အလုပ်သမားနှစ်ဦး သေဆုံး အပြည့်အစုံ
- အင်ဒိုနီးရှားပင်လယ်မှာ မြန်မာ ၂၀၀ ခန့် အင်ဒိုရဲ ဖမ်းမိ အပြည့်အစုံ
- ဘုရားစာဖြန့်ချိရေးကမ်ပိန်း မြန်မာပြည်အနှံ့ စတင် အပြည့်အစုံ
- အဖွဲ့ချုပ်ဝင်၏ ဈာပနကို အကျဉ်းကျသားသမီးများ ပို့ဆောင်ခွင့်မရ အပြည့်အစုံ
- တောင်သူများ ပဲခင်းရေနစ်ပျက်စီးရုံမက မစိုက်ချင်သော နွေစပါးကိုပါ စိုက်နေရ အပြည့်အစုံ
- မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အပိုင်း ၂ (မှတ်စုမှတ်တမ်း) အပြည့်အစုံ
- ပီကာဆာဝက် (Picasaweb) ကိုသုံးရအောင် (လောကဓာတ်ခန်း) အပြည့်အစုံ
- အရှိချင်းပေါင်း (မာမာအေးရဲ့ ကဗျာ) အပြည့်အစုံ
- Myanmar steps up tight bio-security against cross-border bird flu အပြည့်အစုံ
- Fall in rice price hurts Myanmar exporters, farmers အပြည့်အစုံ
- Tourists to Myanmar dip အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၈ ရက်
- မြန်မာ့အရေး တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ ထိုင်းက ဦးဆောင်ပါဝင်မယ် အပြည့်အစုံ
- ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရဖို့ပြင် အပြည့်အစုံ
- လက်ဘနွန်ဘက်ကနေ အစ္စရေးကို ရော့ကက်နဲ့ ပစ်ခတ် အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းတရားခံ ရှာဖွေခြင်း (ဗွီအိုအေ မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်) အပြည့်အစုံ
- အင်တာနက်နဲ့ ကျန်းမာရေး (ဗွီအိုအေ ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်) အပြည့်အစုံ
- တြိဂံတိုင်းမှူးနှင့် ‘၀’စစ်ခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေး အပြည့်အစုံ
- ဘာသာရေးကျမ်းစာများ နေအိမ်မှာ မသင်ရန် သတိပေးတားမြစ် အပြည့်အစုံ
- ကချင်ပြည်နယ်နေ့နှင့် မနောပွဲတွင် အပစ်အခတ်ရပ်အဖွဲ့များ တက်ရောက်မည် အပြည့်အစုံ
- ထောင်ထဲရောက် မိသားစုတခုလုံးကို ဖခင်၏ ဈာပန ပို့ခွင့်မပြု အပြည့်အစုံ
- ပလောင်ဒေသတွင် ဘိန်းခင်းတချို့ကိုသာ စစ်တပ်က ဖျက်ဆီး အပြည့်အစုံ
- သုံးခွ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကို နယ်ဝေးထောင်ပို့ အပြည့်အစုံ
- မိတ္ထီလာမြို့ ရတနာမောင်ရပ်ကွက်က ရယက အဖွဲ့ဝင်တဦး၏ အဂတိလိုက်စားမှု အပြည့်အစုံ
- ကိုထွန်းထွန်းနိုင်ကို မိသားစုနှင့်တွေ့ခွင့် ၁ လ ပိတ် အပြည့်အစုံ
- ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူ စစ်ဆေးခြိမ်းခြောက်ခံရ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများ အိုင်စီအာစီ အကူအညီရရန် အခက်တွေ့ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုအောင်ကျော်ဦးကို ပဲခူးထောင်မှ ပူတာအိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ အပြည့်အစုံ
- ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၁၀ - ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ (ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ကရင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှေ့တန်းမှ ရခိုင်အခြေစိုက်တပ်တချို့ ဆုတ်ခွာလာ အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်ပြည်နယ်၊မြောက်ဦးမြို့နယ်မှတောင်သူ များမတ်ပဲကို အဓိကတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာ အပြည့်အစုံ
- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြေးနှင့် မော်ဒယ်မလေး ဇာတ်လမ်း အပြည့်အစုံ
- ၇ နှစ်သမီး အဓမ္မကျင့် အသတ်ခံရဟု ကရင်အဖွဲ့ပြော အပြည့်အစုံ
- ငွေပေးမှ တရားဟောခွင့်ပြု အပြည့်အစုံ
- မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ရန် စစ်သားနှစ်ဦး ကြိုးစားခဲ့ဟု စွပ်စွဲခံရ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သော ခရီးသွားများ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွား အပြည့်အစုံ
- ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ နေအိမ်တွင်း ဝတ်ပြုခွင့် ပိတ်ပင် အပြည့်အစုံ
- အာဆီယံအစည်းအဝေးကို ထိုင်းတောင်ပိုင်းတွင် ကျင်းပမည် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြက်ငှက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်တင်သွင်းမှုကို မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ပိတ်ပင် အပြည့်အစုံ
- ပခုက္ကူမြို့ပေါ်တွင် မော်တော်ယာဉ်အခွန်များ တိုးမြှင့်ကောက်ခံ အပြည့်အစုံ
- တယ်လီဖုန်းများချပေးရာတွင် ဝန်ကြီးပြောသွားသည့် ဈေးနှုန်းထက် ပိုတောင်းယူနေ အပြည့်အစုံ
- ကေအန်ယူနှင့် ဒီကေဘီအေ ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့ လမ်းမရှိ အပြည့်အစုံ
- ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ၀န်ကြီးဌာန (၃) ခုကို ၀န်ကြီးတဦးတည်းက ကိုင်မည် အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း (၃ဝ) ရာနှုန်း ကျဆင်း အပြည့်အစုံ
- အိန္ဒိယမှ ပဲဝယ်မည့်သတင်း မသေချာသေး အပြည့်အစုံ
- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအသိုင်းအ၀န်း ရေနံမှော်လုပ်ငန်းထိ လက်တံဖြန့် အပြည့်အစုံ
- သင်းပျံ့ပျံ့ နှင်းရနံ့ ကြိုင်တဲ့နေပြည်တော် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ကွာလာလမ်ပူတွင် မြန်မာလုပ်သား ၁၀၀ ခန့် ဖမ်းဆီးခံရ အပြည့်အစုံ
- သန်းကောင်ထက် ညဉ့်မနက်တော့တဲ့ ညငှက်ကလေးတွေ … (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- စစ်အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံအပေါ် တိုင်းပြည်က ကလော် အပြည့်အစုံ
- ပြိုင်းချောင်းရေလှောင်တမံအနီးမှ လယ်မြေများကို စစ်တပ်မှ သိမ်းပိုက်ပြီး နွေစပါးစိုက် အပြည့်အစုံ
- Negotiating humanitarian access to cyclone-affected areas of Myanmar:areview အပြည့်အစုံ
- ASEAN's role in the Cyclone Nargis response: implications, lessons and opportunities အပြည့်အစုံ
- Maternal health care 'extremely limited' in Eastern Burma အပြည့်အစုံ
- Myanmar to modify elephant sanctuary to attract tourists အပြည့်အစုံ- Report on post-Nargis recovery plan to be released in Myanmar အပြည့်အစုံ
- Myanmar footballer listed in players to watch in Asia in 2009 အပြည့်အစုံ
- The world looks away as Burma mocks democracy အပြည့်အစုံ
- Presumingademocratic Myanmar: Looking beyond election 2010 အပြည့်အစုံ
- MYANMAR: Polio campaign targets 7.4 million children အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၇ ရက်
- ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းရှိခုနစ်မြို့သို့ CDMA/GSM တယ်လီဖုန်း ၅၀၀၀ ကျော် မကြာမီချထားမည် အပြည့်အစုံ
- ရသေ့တောင်ရှင်တစ်ထောင်ပွဲကို အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပမည် အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရေယာဉ်အစင်း ၅၈ လေလံတင်ရောင်းချ အပြည့်အစုံ
- Hip Hop အဆိုတော် ရန်ရန်ချမ်း ပြန်လွတ်လာ အပြည့်အစုံ
- ဝတ်မှုန်ရွှေရည်သတင်း Weekly Eleven သာ ဖော်ပြခွင့်ရ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ ခု ၀န်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ အဂတိလိုက်စားမှု (၅၀၀) နီးပါးရှိ အပြည့်အစုံ
- ကွယ်လွန်သူ ဦးစောမြအောင်နေရာ အစားထိုးမည်၊ ပါတီလှုပ်ရှားမှု ရပ်မသွားဟု ဦးအေးသာအောင်ပြော အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်မှာ အက်ဖ်အီးစီဈေးကျ အပြည့်အစုံ
- ပြည်တွင်းရေကြောင်းသင်္ဘောများ ပြင်ပဒီဇယ်ဆီဖြင့် ဆွဲမည် အပြည့်အစုံ
- ကလေးစစ်သားဘ၀ (၁၀) နှစ်ကြာနေခဲ့ရသူ အိုင်အယ်လ်အိုကြောင့် ပြန်လွတ် အပြည့်အစုံ
- ရှမ်းပြည်မှ ထီလိမ်ဂိုဏ်း (ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းပေးစာ) အပြည့်အစုံ
- တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင် နကသများ ဒုက္ခပေး (ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းပေးစာ) အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားများ လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်း တနှစ်ထပ်တိုးပေးမည် အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးကို ဒီလိုမြင်ကြ၊ ဆန္ဒပြုကြသည် (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- အများဆိုင်နာမ် (ရသစာစု) အပြည့်အစုံ
- အင်းလေးတွင် ဆောင်းခိုငှက်များ လျော့နည်း အပြည့်အစုံ
- ဒီကေဘီအေ နယ်စပ်စောင့်ရမည် အပြည့်အစုံ
- မူးယစ်ဆေးသယ်သူ စစ်ဗိုလ်တဦး ဖမ်းဆီးခံရ အပြည့်အစုံ
- တစည စည်းရုံးရေး စတော့မည် အပြည့်အစုံ
- အစိုးရမင်းများ၏ ဘုံဗိမာန်သို့ အလည်တခေါက် (ထွေရာလေးပါး) အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်ရိုးမနှင့် ပဲခူးရိုးမအစပ်တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုးပွားလာ အပြည့်အစုံ
- ကျွန်းသစ်နှင့် သစ်မာများကို ခိုးထုတ်ရောင်းချမူကြောင့် ကျောက်တော်နယ်မှ သစ်တောများ ပြုန်းတီးရန် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက် အပြည့်အစုံ
- တရားမဝင် ထိုင်းငါးဖမ်းလှေများကို မြန်မာဘက်က မကြာခဏ ဖမ်းဆီးဒဏ်ငွေရိုက် အပြည့်အစုံ
- သီးလေးသီးအငြိမ့်ပွဲ ပရိသတ်ရဲ့ တုန့်ပြန်သံ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အပိုင်း ၁ အပြည့်အစုံ
- စာရေးဆရာမကြီး ခင်မျိုးချစ် (၁၉၁၅ - ၁၉၉၉) ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရ စ ကားများ စုစည်းချက် အပြည့်အစုံ
- လူထုလှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု စံပယ်အဖွဲ့က ပြော အပြည့်အစုံ
- ထောင်နှစ်ရှည်အမိန့်ချမှတ်ခံရသူ လက်ထပ်ခွင့်တောင်း၊ တရားရုံးက လက်မခံ အပြည့်အစုံ
- ကိုမားကီးရဲ့ညီ ကိုကတ်နက်ကို တောင်ငူ လေးမိုင်ရဲဘက်စခန်းပို့ အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်ဒုက္ခသည်တဦး ထောင် ၁၄ နှစ်ကျ၊ မိသားစု ထောင်ဝင်စာတွေ့ရန် အခက်ကြုံ အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်ဒီချုပ်နဲ့ လှိုင်သာယာအဖွဲ့ချုပ်စည်း ကွယ်လွန် အပြည့်အစုံ
- ကျောင်းကားမလာ၍ စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးအမြှောက်ဒဏ်ကြောင့် လူ ၃၀ ထက်မနည်းသေ အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာလူထုအတွက် လူသားစာနာမှုအထောက်အကူတွေ ပေးနိုင်ဖို့ အစ္စရေး သဘောတူ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဆိုင်ရာ ပညာပေးအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
- ရုရှား-ယူကရိန်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ဥရောပတ၀န်း ပျံ့နှံ့ အပြည့်အစုံ
- နှစ်သစ်ကူးစ ရန်ကုန်က အပြေးအလွှား သတင်းများအပြည့်အစုံ
- သုံးနာရီအပစ်ရပ်ရုံနဲ့ ဂါဇာလူထုအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်နိုင် အပြည့်အစုံ
- ရုရှားသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိတ်လို့ ဥရောပဒုက္ခရောက် အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာတိုက်ခိုက်မှု အစ္စရေးဖက်က တနေ့သုံးနာရီ ရပ်နားမည် အပြည့်အစုံ
- အာဆီယံညီလာခံ ထိုင်းအပန်းဖြေမြို့ကို ရွှေ့ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုး ၂၀၀ပါ သင်္ဘောတစင်း အင်ဒိုနီးရှား အာချေးကမ်းတွင် တွေ့ရှိ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထပ်ဆင့်ထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံနေရ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာပို့ကုန်ဝင်ငွေ ထက်ဝက်ကျော် ကျဆင်းဖွယ် အပြည့်အစုံ
- စစ်တွေတွင် ကျောင်းသား ၅၀၀ ခန့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြ (SYCB အတွင်းရေးမှူး - ရခိုင်လူငယ် ကိုထွန်းဇော်နှင့် အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသား၏ ကုမ္ပဏီ မကွေးတိုင်း ရေနံလုပ်ကွက်များတွင် ၀င်ချယ်လှယ် အပြည့်အစုံ
- မလေးရှားမှာ ပျောက်ဆုံးနေသော အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကူညီသူကို စုံစမ်းရှာဖွေ အပြည့်အစုံ
- ကွာလာလမ်ပူတွင် မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားလုပ်သား ၃၀၀ ခန့် ဖမ်းဆီးခံရ အပြည့်အစုံ
- ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများကို ဦးဝင်းတင် တွေ့ဆုံအားပေး အပြည့်အစုံ
- ဟားမတ်စ်ဟာ ဘယ်လိုအဖွဲ့မျိုးလဲ အပြည့်အစုံ
- ၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များ အပြည့်အစုံ
- လော့စ်အိန်ဂျလိစ်က သီးလေးသီးအငြိမ့်ပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးရောက် မြန်မာများ ဘေးရန်ကင်းဟု သံရုံးကပြော အပြည့်အစုံ
- အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းမည့် အစီအစဉ်အပေါ် သူတို့အမြင် (အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- သတင်းသမားဘ၀ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဗကသခေါင်းဆောင် ဆေးရုံတက် အပြည့်အစုံ
- ပြင်ပလောင်စာဆီဈေးနှုန်းကျသော်လည်း အစိုးရထုတ်ဈေး မပြောင်းလဲ အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း အပြည့်အစုံ
- Boat with 193 foreigners stranded off Aceh, Indonesia အပြည့်အစုံ
- Burma, Myanmar: YES , WE CAN WIN THIS AWARD အပြည့်အစုံ
- Over7mln children to be vaccinated against polio in Myanmar အပြည့်အစုံ
- Drug Trade In The ‘Golden Triangle’ အပြည့်အစုံ
- Myanmar export through border trade increases in 11 months of 2008 အပြည့်အစုံ
- No novices at posing! အပြည့်အစုံ
- Myanmar: Farmers lament post-Nargis harvest အပြည့်အစုံ
- Why is the Italian army shooting techies? အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၆ ရက်
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားအတိုင်း ပြတ်သားဖို့ အချိန်တန်ပြီဟု ဦးဝင်းတင် သတိပေး အပြည့်စုံ
- လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောမြအောင်၏ ဈာပနသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် လွမ်းသူ့ပန်းခြင်းပို့ အပြည့်စုံ
- လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာဒဂုန်တာရာနှင့် ခေတ်ပြိုင်သတင်းထောက် မင်းနိုင်သူ ဆက် သွယ်မေးမြန်းချက် (အင်တာဗျူး) အပြည့်စုံ
- ဆင်ပြိုင်ထောင်ခြင်း (အတို့အထိ) အပြည့်စုံ
- ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အလားအလာ (ဗွီအိုအေ မျက်မှောက်ရေးရာ) အပြည့်စုံ
- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွက် နှစ်သစ်သံန္နိဌာန် (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) အပြည့်စုံ
- ‘၀’ပြည်နယ်အစိုးရအဖြစ် ပြောင်းလဲမည့်အပေါ် တိုင်းရင်းသားများ၏ အမြင် အပြည့်စုံ
- ‘၀’ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ခြေလှမ်းအပေါ် သုံးသပ်ချက် အပြည့်စုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လူချင်းတွေ့ခွင့် ပိတ်ပင်ထား အပြည့်စုံ
- နိုင်ငံရေးအမှုလိုက်သော ရှေ့နေကို တညဖမ်းဆီးထား အပြည့်စုံ
- ဟောင်သရော အထူးဒေသအဖွဲ့မှ တပ်ရင်းမှူးယောက္ခမ ပြန်ပေးဆွဲခံရ အပြည့်စုံ
- ၁၁ ရက်မြောက် အစ္စရေးထိုးစစ်ကြောင့် ဂါဇာမှာ သေဆုံးသူ တိုး အပြည့်စုံ
- ဂါဇာငရဲတွင်းထဲက လူထုဘ၀ အပြည့်စုံ
- ရခိုင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာစောမြအောင် ကွယ်လွန် အပြည့်စုံ
- ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါက်တာစောမြအောင် ကွယ်လွန် အပြည့်စုံ
- ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါက်တာဦးစောမြအောင် ကွယ်လွန် အပြည့်စုံ
- စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် ချေးငွေမရသဖြင့် လယ်သမားများ အခက်တွေ့ အပြည့်စုံ
- ပလောင်ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးရေးဆင်း အပြည့်စုံ
- ဂျပ်စတစ်စ်အဖွဲ့ဝင်များကို ထောင်နှစ်ရှည်ချ အပြည့်စုံ
- အာဏာပိုင်များက ငွေကြေးအဆမတန် ကောက်ခံခြင်းအပေါ် လုပ်ငန်းရှင်များ မကျေမနပ်ဖြစ်နေ အပြည့်စုံ
- နာဂစ်အရေးကူညီသူ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် အပြည့်စုံ
- ကချင်မနောပွဲကြီး ကျင်းပနေပြီ အပြည့်စုံ
- ထိုင်း ညကလပ်မီးလောင်မှု မြန်မာနိုင်ငံသားတဦး သေဆုံး အပြည့်စုံ
- စစ်တွေတက္ကသိုလ် ကျောင်းကားခတက် အပြည့်စုံ
- မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကဲ့သို့ အစီးမခံရအောင် နအဖ၀န်ကြီးချူပ် ညွှန်ကြား အပြည့်စုံ
- ဆန္ဒပြမှုဖြစ်အောင် အန်အယ်လ်ဒီသွေးထိုးကြောင်း စစ်အစိုးရစွပ်စွဲ အပြည့်စုံ
- ၀န်ထမ်းလစာတိုးပေးမည်ဟု နေပြည်တော်မှာ သတင်းပျံ့ အပြည့်စုံ
- မီတာမသုံးသည့် စီးတီးတက္ကစီများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သိမ်းမည် အပြည့်စုံ
- ကလေးစစ်သားတဦး ရန်ကုန်မိဘများထံ ပြန်ရောက် အပြည့်စုံ
- စက်မှု ၁ ၀န်ထမ်းများနှင့် လိမ် ၄ လိမ် ဆောင်ပုဒ် အပြည့်စုံ
- (ခေတ်ပြိုင်)အယ်ဒီတာသို့ … (လုပ်ငန်းရှင်တဦး) အပြည့်စုံ
- (ခေတ်ပြိုင်)အယ်ဒီတာသို့ … (မြို့ခံတဦး) အပြည့်စုံ
- ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး ထောင်ဆေးရုံရောက် အပြည့်စုံ
- ရခိုင်ခေါင်းဆောင် ဦးစောမြအောင် ကွယ်လွန် အပြည့်စုံ
- အနှစ်သာရပျက် တန်ဖိုးမဲ့လာသော သမိုင်းဝင်နေ့ (ဆောင်းပါး) အပြည့်စုံ
- ရခိုင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးစောမြအောင် ကွယ်လွန် အပြည့်စုံ
- ‘၀’ပြည်နယ်အစိုးရအဖြစ် အမည်ပြောင်းမည်ကို အကြောင်းကြား အပြည့်စုံ
- ၂၀၀၈ ပထမကိုးလအတွင်း မြန်မာ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှစ်ဆနီးပါးတိုး အပြည့်စုံ
- အစ္စရေးတို့ရဲ့ ဂါဇာမြေပြင်စစ်ဆင်ရေး သုံးညမြောက် အပြည့်စုံ
- ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့ရေး အခက်အခဲများရှိနေ အပြည့်စုံ
- ဗကသခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုအား ထောင်ဆေးရုံတင်ထား အပြည့်စုံ
- ချေးငွေအတွက် ဖိအားပေးမှုတွေရှိလာမှာကို တောင်သူတွေ စိုးရိမ် အပြည့်စုံ
- ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကို ရုံးထုတ် အပြည့်စုံ
- စာပေစိစစ်ရေးက ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကို ၀ါဒဖြန့်ရာတွင် အသုံးချနေ အပြည့်စုံ
- ဦးစောမြအောင်၏ ဈာပန ယနေ့ ပြုလုပ်မည် အပြည့်စုံ
- လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ပွဲအပြီး သီးလေးသီး (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်စုံ
- တိုပါးရိုး ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ၁၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်စုံ
- ရွှေရတုသဘင်မှသည် စိန်ရတုသဘင်သို့ (ဆောင်းပါး) အပြည့်စုံ
- ရခိုင်ပြည်အချုပ်အချာအာဏာကျဆုံးနေ့ အခမ်းအနား မလေးရှားရောက် ရခိုင်အမျိုးသားများကလည်း ကျင်း ပ အပြည့်စုံ
- မြန်မာလွတ်လပ်ရေးအပေါ် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များအမြင် အပြည့်စုံ
- Christian group condemns Burma human rights violations အပြည့်စုံ
- No laughing matter အပြည့်စုံ
- UNICEF to continue polio vaccination program in Myanmar this year အပြည့်စုံ
- 25% fall in Myanmar's tourists အပြည့်စုံ
- Burmese Ethnic Political Leader Saw Mara Aung Dies at 91 အပြည့်စုံ
- Report: UNICEF to Continue Polio Vaccinations in Burma အပြည့်စုံ
- Japanese literature translation contest to be held in Myanmar အပြည့်စုံ
- S Korean government to provide scholarship to Myanmar students အပြည့်စုံ
- Myanmar's 9-month trade surplus dives 39 percent as exports of gas fall အပြည့်စုံ
- NE militants finding safe haven in Bangladesh, Myanmar: Gogoi အပြည့်စုံ
- David Scott Mathieson: The world looks away as Burma mocks democracy အပြည့်စုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၅ ရက်
- စစ်တွေကျောင်းသား ၅၀၀ ခန့် သွားလာရေးခက်ခဲလို့ လမ်းလျှောက်ကန့်ကွက် အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဦးစောမြအောင် ကွယ်လွန် (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ့တွင် ထူးခြားသည့် ဆိုင်းဘုတ်တခုတင်ထား အပြည့်အစုံ
- နှစ်ကူးအကြို ထိုင်းညကလပ်မီးလောင်မှု သေဆုံးမှုအထဲ မြန်မာတဦးပါ အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေ ၈ လအကြာ ပြန်လည်နာလန်မထူနိုင်သေး အပြည့်အစုံ
- ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အမေရိကန်သံရုံးသစ် အီရတ်မှာဖွင့်လှစ် အပြည့်အစုံ
- ဟားမတ်စ်ကို အစ္စရေးစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု ၁၀ ရက်မြောက်ပြီ အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတာ ၆၁ နှစ် ကြာလာခဲ့ပေမယ့် မြန်မာ ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်ရေး အရသာကို ခံစားကြရ ပါသလား (ဗွီအိုအေ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းအစီအစဉ်) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာအလုပ်သမားများထံမှ ထိုင်း-မြန်မာအာဏာပိုင်များ လာဘ်ယူနေ အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ ကျန်းမာရေးအလွန်ဆိုးဝါးနေ အပြည့်အစုံ
- ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြိုးတုပ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ကို အလေးပြု အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာအရေး ဥရောပသံတမန်တွေ ကြိုးပမ်း အပြည့်အစုံ
- ‘၀’ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ခြေလှမ်းအပေါ် သုံးသပ်ချက် အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လပ်ရေးသီချင်းများ ဖွင့် အပြည့်အစုံ
- ‘၀’ဒေသ အမည်ပြောင်းပြီ အပြည့်အစုံ
- ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း အစောင် ၃၀ ကျော် လိုင်စင်သိမ်းခံရ အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်လုံခြုံရေး အထူးတင်းကျပ် အပြည့်အစုံ
- ဦးသန့်အဆိုအမိန့် မျက်နှာဖုံးတွင်ပါရှိသည့် မြန်မာသစ်မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေခွင့်မကျသေး အပြည့်အစုံ
- ကျူရှင်ဆရာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- လိုင်စင်သက်တမ်းမတိုးသည့် စာနယ်ဇင်းများ ရပ်ဆိုင်း အပြည့်အစုံ
- မီဇိုရမ်မှာ မြန်မာစားသောက်ဆိုင် မီးလောင် အပြည့်အစုံ
- မန္တလေးတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင် မီးလောင် အပြည့်အစုံ
- မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မွေးနေ့ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူတစ်သိန်းကျော် လာရောက်ဖူးမျှော်ပူဇော် အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်သို့ပြန်လာကြသော အလုပ်သမားများ အတင်းအဓမ္မ ငွေကောက်ခံနေရ အပြည့်အစုံ
- တပ်ရင်း၌ အသုံးပြုရန်အတွက် ရွာသားများ သစ်နှင့်ထင်း ရှာပေးရ အပြည့်အစုံ
- ဇာဂနာ ပြန်လာတဲ့ည … သီးလေးသီးနဲ့ ဆေးရောင်စုံအငြိမ့်ပွဲ အပြည့်အစုံ
- သီးလေးသီးအငြိမ့်သဘင်ရဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရီးစဉ် ပထမဆုံးပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ အပြည့်အစုံ
- စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဒဏ် ဗမာစစ်တပ် မရှုမလှခံနေရ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးအလားအလာ အပြည့်အစုံ
- တစက္ကန့်ပိုပြီးနေခဲ့ရတဲ့ ၂၀၀ဂခုနှစ် (သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ) အပြည့်အစုံ
- ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်ပွားစေတဲ့ အင်းဆက်ပိုးမွှားများ နှိမ်နင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသစ် အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံများ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာတိုင်းရင်းသူတွေရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း အတွေ့အကြုံတွေအပေါ် ပြန်ပြောင်းသုံးသပ်ချက် အပြည့်အစုံ
- ၆၁ နှစ်ကြာပြီးနောက် ယနေ့မြန်မာပြည် (ဒီမိုကရေစီရေးရာ) အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတချို့ အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ရေးနေ့ သတင်းများ အပြည့်အစုံ
- အဖမ်းခံရတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ် ၉ ဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း အပြည့်အစုံ
- စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ရေးအရှုပ်တော်ပုံ အန်စီယူဘီ အကွဲအပြဲသရုပ်ပေါ်လွင် အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ နှိုးဆော်စာများ ရန်ကုန်မှာကြဲ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ ခုအတွင်း ဆန္ဒပြပွဲများ ထပ်မံပေါက်လာမည်ဟု ဦးဝင်းတင် ခန့်မှန်း အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှုန်ဝါးဝါး (ခေတ်ပြိုင်အင်တာနက် အယ်ဒီတာ့အာဘော်) အပြည့်အစုံ
- သွားပေဦးတော့ ဒီတကွေ့ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ အရေးပါသူများ (၁) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ အရေးပါသူများ (၂) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ နှစ်သစ်မှာ သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ အပြည့်အစုံ
- UWSA က အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကို အမည်ပြောင်း အပြည့်အစုံ
- ထီးမူခီး (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာတိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ဆဲ၊ သေဆုံးဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက် များလာ အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးက ဂါဇာကို ၀ိုင်းပိတ်ထားပြီး ၀င်တိုက် အပြည့်အစုံ
- ဇီးကုန်မြို့နယ် ကျေးရွာတွေမှာ အဓမ္မလုပ်အားပေး ရှိနေဆဲ အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူ ဖမ်းဆီးခံရ အပြည့်အစုံ
- ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း ဖွင့်လှစ် အပြည့်အစုံ
- လူရွှင်တော်ပါပါလေး၏ ဖခင်ရက်လည် အာဏာပိုင်များ အနီးကပ်စောင့်ကြည့် အပြည့်အစုံ
- အဖွဲ့ချုပ်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် လပတ်ဆွေးနွေးပွဲ အပြည့်အစုံ
- အကျိုးစီးပွားရှာဖွေကြသူများ … ဤသို့ကွဲပြား၏ (အတွေးအမြင်) အပြည့်အစုံ
- ကမာဝက်ကျေးရွာရှိ မြင်းလှည်းမောင်းသမားများ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဝယ်ရန် ဖိအားပေးခံရ အပြည့်အစုံ
- မွန်လက်ယက်ကန်းသမများ အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်နေကြရ အပြည့်အစုံ
- Myanmar seeks new partnerships with Brunei အပြည့်အစုံ
- Myanmar grants free rice export from Yangon region အပြည့်အစုံ
- China leads surge in foreign investment in Myanmar during first9months အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၄ ရက်
- အထိန်းသိမ်းခံ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ခြံဝင်းအတွင်း လွတ်လပ်ရေးနေ့သီချင်းသံများ ကြားနေရ အပြည့်အစုံ
- ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း အပြည့်အစုံ
- ၆၁ ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွေ ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာပါရဂူနှင့် သက်ကြီးစာပေပညာရှင်များ ၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအ မှတ် ညစာစားပွဲကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ ၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကျင်းပ၊ သဘောထားကြေငြာချက် ထုတ်ပြန် အပြည့်အစုံ
- ၆၁ နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးစတင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ တိုက် တွန်း အပြည့်အစုံ
- မန္တလေးမှာလည်း ၆၁ ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၈၈ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ရန်ကုန်မြို့က ခြောက်ကပ်ကပ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အပြည့်အစုံ
- NLD က နအဖရဲ့ သဘောထားကို လက်မခံ အပြည့်အစုံ
- အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်မရှိဟု အတိုက်အခံ မှတ်ချက်ပြု အပြည့်အစုံ
- စင်ပြိုင်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းမယ့်အပေါ် ဆွေးနွေးချက် (အာရ်အက်ဖ်အေ တနင်္ဂနွေဆွေးနွေးပွဲ) အပြည့်အစုံ
- စင်ပြိုင်အသံ (သူတို့အာဘော်) အပြည့်အစုံ
- မြစ်ငယ်မှာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့် အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာမှာ အစ္စရေးမြေပြင်တပ်နဲ့ ဟားမတ်အဖွဲ့ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်၊ လူ ၅၀၀ ၀န်းကျင် သေဆုံးပြီ အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်ပါမောက္ခနှင့် ဇနီးသည်ကို စစ်အစိုးရက ပြည်ဝင်ခွင့်ငြင်းပယ် အပြည့်အစုံ
- ‘၀’ဒေသကို အမည်သစ်နဲ့ ပြောင်းလဲခေါ်မယ်လို့ဆို အပြည့်အစုံ
- ကိုမော်ကြီးအိမ်က သီးလေးသီး (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- Understanding new Thai policy towards Burma အပြည့်အစုံ
- Myanmar celebrates 61st anniversary of independence အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေးလ် မြေပြင်တပ်တွေ ဂါဇာကို ၀င်တိုက်ပြီ အပြည့်အစုံ
- အင်ဒိုနီးရှားကမ်းလွန်တွင် အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ် အပြည့်အစုံ
- ဆန့်ကျင်မှုများနဲ့ ထိုင်းအစိုးရသစ် (ဗွီဒီယိုသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ၆၁ ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြု အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မိသားစုဆရာဝန်နှင့် တွေ့ခွင့်မပေး၊ ရှေ့နေနှင့် တွေ့ခွင့်မပြု အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ပြီးရင်း လွတ်လပ်အောင် (မာမာအေးရဲ့ ကဗျာ) အပြည့်အစုံ
- (၆၁)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ရေနံချောင်းမြို့နယ်တွင် ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ၂၂၄ နှစ်မြောက် ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးနေ့ အခမ်းအနား နော်ဝေတွင် ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးနေ့ အခမ်းအနား ဒိန်းမတ်နိုင်တွင်လည်း ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- Marking Burma's Independence Day အပြည့်အစုံ
- US expresses support in Burma anniversary message အပြည့်အစုံ
- Opposition: No hope for future of Myanmar အပြည့်အစုံ
- 2009 Predictions for Burma အပြည့်အစုံ
- Myanmar to conduct first Russian language training for tourism အပြည့်အစုံ
- Myanmar to conduct 1st pilot training course at home အပြည့်အစုံ
- Human Rights Abuse in Myanmar? အပြည့်အစုံ
- Defiant Myanmar junta marks independence day အပြည့်အစုံ
- Myanmar junta condemns 'neocolonialist' threat to independence အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၃ ရက်
- မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ သ၀ဏ်လွှာ အပြည့်အစုံ
- ၆၁ ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြို ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှာ ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနား ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- ဒေါက်တာစိန်ဝင်း စင်ပြိုင်အစိုးရကို တိုးချဲ့ဖွဲ့မည်၊ မည်သည့်အချိန် အပြီးသတ်ဖွဲ့မလဲ ရေရေရာရာမရှိသေး အပြည့်အစုံ
- ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး လွှတ်တော်ခေါ်ဖို့ ဒဂုန်တာရာ တိုက်တွန်း အပြည့်အစုံ
- စင်ပြိုင်အစိုးရတရပ်ဖွဲ့စည်းရန် အမျိုးသားကောင်စီ စီစဉ်နေပြီ (အင်တာဗျူး) အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ရှိတ်ဟာစီနာ လိုလား အပြည့်အစုံ
- ဒုက္ခသည်တွေလက်ခံရေးအစီအစဉ် အမေရိကန်လွှတ်တော်ကို အဆိုပြု အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ကရင်ဒုက္ခသည်တွေကြောင့် ဆက်လက်တည်မြဲ အပြည့်အစုံ
- အရှေ့အလယ်ပိုင်းပဋိပက္ခ ဟားမတ်စ်ကို သမ္မတဘုရှ် အပြစ်တင် အပြည့်အစုံ
- အမေရိကန်သမ္မတ မစ္စတာဘုရ်ှနဲ့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံပွဲမှာ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး မယ် အပြည့်အစုံ
- ကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ ဒီကေဘီအေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား အပြည့်အစုံ
- အဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်စည်းအဖွဲ့ဝင်များရဲ့ အယူခံလွှာကို တိုင်းတရားရုံးက ထပ်မံပယ်ချ အပြည့်အစုံ
- နတ်စဉ်ချောင်ရွာသားတွေမှာတော့ အဓမ္မအခိုင်းခံနေရဆဲ အပြည့်အစုံ
- မြန်မာဝန်ကြီး နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဦးစားပေး အပြည့်အစုံ
- မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေး အမေရိကန် ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးမည် အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေး မြေပြင်စစ်ဆင်ရေး စတင် အပြည့်အစုံ
- မြေပြင်ထိုးစစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟားမတ်စ်က အစ္စရေးကို သတိပေး အပြည့်အစုံ
- တွံတေးမြို့နယ်မှာ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်မလား (ဘီဘီစီ ဆွေးနွေးခန်း) အပြည့်အစုံ
- မကွေးတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ဝင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရေး ဆွေးနွေး အပြည့်အစုံ
- လားရှိုးထောင်မှာ အေးလွန်း၍ ကိုမင်းဇေယျာ ခါးရောဂါ ပြန်ခံစားနေရ အပြည့်အစုံ
- တောင်ကုတ်အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းအောင်ကို ထောင် ၁၅ နှစ် ထပ်ချ အပြည့်အစုံ
- အန်အယ်လ်ဒီနှင့် မဟာမိတ်အဖွဲ့များ၏ ၂၀၀၉ နှစ်သစ်ကူး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ
- ဆရာတက်တိုး၏ နိုင်ငံရေးစာပေ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း (၂၃)(နိဂုံးပိုင်း) အပြည့်အစုံ
- အဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နယ်မြေ(မလေးရှား)ရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- ထွန်းထွန်းနိုင်ရဲ့ ဈာပန (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- Envoy to Myanmar to visit China and tour Asian nations အပြည့်အစုံ
- Myanmar terminates some publications for failure to register အပြည့်အစုံ
- Burma refugees are welcomed by youths အပြည့်အစုံ
- DPRK vows to strengthen ties with Myanmar အပြည့်အစုံ
- Greetings to Myanmar on national day အပြည့်အစုံ
- Brussels talks human rights with Beijing အပြည့်အစုံ
- A call foranon-violent defence to help humanity အပြည့်အစုံ
- National Day of Myanmar အပြည့်အစုံ
- Test Bench: Walking boots အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၂ ရက်
- တမီးသူပုန်တွေရဲ့ အဓိကခြေကုပ်မြို့ကို သိရိလင်္ကာစစ်တပ် သိမ်းပိုက် အပြည့်အစုံ
- ဂါဇာမှာပိတ်မိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အစ္စရေး ထွက်ခွာခွင့်ပြု အပြည့်အစုံ
- အဲန်စီဂျီယူဘီ စင်ပြိုင်အစိုးရအဖြစ် ဆက်ရှိနေအုံးမည် အပြည့်အစုံ
- လောင်စာဆီဈေးကျပေမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်းဒဏ် မြန်မာလူထု ခံနေရဆဲ အပြည့်အစုံ
- အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းမည် အပြည့်အစုံ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို တလလုံး ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်မပြု အပြည့်အစုံ
- မလေးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးမှာ လွတ်လပ်ရေးအကြို ဆန္ဒပြ အပြည့်အစုံ
- ပစ္စည်းပျောက်မှုတွေကို ဆိုင်ရာရဲစခန်းက အရေးတယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ အပြည့်အစုံ
- ရခိုင်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးခဲ့ခြင်း ၂၂၄ ကြိမ်မြောက် အခမ်းအနားကျင်းပ အပြည့်အစုံ
- တမီးလ်သူပုန်အခြေစိုက်စခန်း သီရိလင်္ကာ စစ်တပ်သိမ်း အပြည့်အစုံ
- ကဗျာဆရာ ကွယ်လွန်ခြင်း (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများတွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်မရှိသေး အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ နိုင်ငံရေး အလားအလာ မကောင်းနိုင်ဟု ဦးဝင်းတင် ခန့်မှန်း အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ မှာ မြောက်ကိုရီးယားက စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေး ဦးစားပေးမည် အပြည့်အစုံ
- မေလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ရန် မိတ္ထီလာခရိုင်အဖွဲ့ချုပ်တောင်းဆို အပြည့်အစုံ
- စစ်အရာရှိတဦးကြောင့် ရွာခံများ အခက်တွေ့ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးနှစ်ချုပ် အပြည့်အစုံ
- နာဂစ်ဒေသမှာ ပညာရေးအခြေအနေ ဆုတ်ယုတ်လာ အပြည့်အစုံ
- ရေနံချောင်းမှာ ရေရှားပါးမှုကြောင့် ဒေသခံတွေ မီးဘေးအထူးစိုးရိမ် အပြည့်အစုံ
- ဟက်ပီနယူးယီးယားတဲ့လား (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့က ဖူးတွေ့ရတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရား (ဓာတ်ပုံသတင်း) အပြည့်အစုံ
- မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တန်ပြန်ထောက်လှမ်း ခြေမှုန်းရေးအစီအစဉ် အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်သင့်ပြီဟု ရှိတ်ဟာရှီးနာ ထုတ်ဖော်ပြောကြား အပြည့်အစုံ
- ဟက်ပီနယူးရီးယား (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် ဆင်ဆာဘုတ် ခွင့်ပြုချက်လို အပြည့်အစုံ
- ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးကက်တွင် ပြုလုပ်သော ရခိုင်အချုပ်အခြာ အာဏာကျဆုံးနေ့ လူပေါင်း ၂၀၀ ခန့် တက်ရောက် အပြည့်အစုံ
- US Backs Democracy in Burma Ahead of Independence Observance အပြည့်အစုံ
- US openly backs Burma democracy အပြည့်အစုံ
- US notes Myanmar independence anniversary အပြည့်အစုံ
ဇန်န၀ါရီ - ၁ ရက်
- အန်စီယူဘီ (NCUB)က စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ဖို့ စီစဉ်နေ အပြည့်အစုံ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မိသားစုဆရာဝန် ယနေ့တွေ့ အပြည့်အစုံ
- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် UDP ပြည်ပမှာ လှုပ်ရှား အပြည့်အစုံ
- နှစ်သစ်ကူးအကြို ထိုင်းညကလပ်မီး လူအနည်းဆုံး ၆၀ သေဆုံး အပြည့်အစုံ
- အစ္စရေး လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်တဦး သေဆုံး အပြည့်အစုံ
- ထွက်ပြေးလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကို မြန်မာကတဆင့် ထိုင်းဘက်ပို့ အပြည့်အစုံ
- ဒီဇင်ဘာ စာကိုး၊ စကားကိုး အပြည့်အစုံ
- ကရုဏာပန်းများ (ဆောင်းပါး) အပြည့်အစုံ
- Suu Kyi is allowed visit by her doctor အပြည့်အစုံ
- Burma frees North Korean refugees အပြည့်အစုံ
- North Koreans handed to Thailand အပြည့်အစုံ
- Myanmar to expel NKoreans အပြည့်အစုံ
- Myanmar exports 150,000 tons of rice in first three quarters of 2008-09 အပြည့်အစုံ
- Feature: Ten Asian Players To Watch In 2009 အပြည့်အစုံ
- Dozens of New Year's revelers die as fire sweeps through Bangkok nightclub အပြည့်အစုံ
- Death toll following Bangkok fire rises to 61 အပြည့်အစုံ
- At Least 59 Die in Bangkok Club Fire အပြည့်အစုံ
Posted by Bay of Arakan at 2:43 AM ,0comments
Labels: သတင်းများ (ပယ်ချ)